မသာတစ်ခေါက် ကျောင်းဆယ်ခေါက်တဲ့ ။ ငယ်ငယ်တုန်းက အဓိပ္ပါယ် သေချာ နားမလည်တော့ တမျိုး အထင်မှတ် မှားခဲ့တယ် ၊ မသာ ကို တစ်ခေါက်သွားပို့ ပြီးရင် မကောင်းဆိုးဝါးကောင်တွေ ကပ်နေမစိုးလို့ဘုန်းကြီးကျောင်း ဆယ်ခေါက်သွားမှ အဲ့ဒီ မကောင်းဆိုးဝါးကောင်တွေ ပျောက်တယ် လို့လေ ။ အယူတိမ်းလို့နတ်စိမ်း မဖြစ်တာ ကံကောင်း ။ နောက်မှ အဓိပ္ပါယ် သေချာ သိတော့ မိုး နဲ့ မြေလို ကွာခြား နေပါလား လို့ကိုယ့် ကိုယ်ကိုယ် အပြစ်တင် မိတယ် ။ တကယ်ဆိုရင် တော့ မသာတခေါက် ပို့ လို့ ရတဲ့အကျိုး ကုသိုလ် ဟာ ဘုရားပုထိုး ကျောင်းသွား တာ ဆယ်ခေါက်စာ နဲ့ညီမျှပါတယ်တဲ့ ။ ဒါကြောင့် သာရေးကိစ္စ တွေကို မသွားဖြစ်ရင်သာ နေရမယ်။(အိုက်တင်တခွဲသားနဲ့ ဟန်ဆောင်ပြုံးပြီး ပြိုင်ဆိုင်နေကြတဲ့ မင်္ဂလာဆောင် ဧည့်ခံပွဲများဆို တတ်နိုင်သလောက် ရှောင်ခဲ့တယ် ) ။ နာရေးကိစ္စတွေ ကိုတော့ အတတ်နိုင်ဆုံး သွားတဲ့ အကျင့်တခု ဖြစ်လာရတာ ကြာပါပြီ ။ အသုဘ ရှုတယ်ဆိုတာ သံဝေဂ တရားရစရာတွေ အပြည့်ပဲမို့ငယ်ငယ်က အသုဘ ဆိုတာ သွားကြည့်ဖို့လိုက်ပို့ ဖို့မပြောနဲ့အသုဘ သတင်းမေးဖို့သွားကြတဲ့ အဖေတို့အမေတို့ နဲ့ တောင် လိုက်ဖို့ကြောက်ခဲ့ သလောက် ၊ ခုဆိုရင် နာရေး ကိစ္စတွေကို မရောက် ရောက်အောင်သွားတတ်ပါတယ် ။လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ် မြန်မာပြည် ပြန်တဲ့ အချိန် ခဏလေး အတွင်းမှာ အသုဘ ၃ ခေါက်ရောက်ဖြစ်ခဲ့တယ် ။ရေဝေး နှစ်ခေါက် ၊ ထိန်ပင် တစ်ခေါက်ပေါ့ ။ကိုယ့်အလှည့် ဘယ်တော့ရောက်မလည်းဆိုတဲ့ အတွေးတွေလည်း အခေါက်တိုင်းတွေး မိခဲ့တယ် ။
ဒါ့အပြင် ခေတ်နဲ့အညီ အသုဘ ပို့ ရခြင်း ဒုက္ခ ဆိုတာ ဒီလိုပါလားလို့သေချာ သိရတော့တယ် ။ နေရခက် တဲ့ ဒီခေတ်အခါကြီး မှာ သေတာကမှ ကောင်းအုံးမယ်လို့အတွေးတွေ ရှိခဲ့ ဖူးပါတယ် ။ ဟုတ်ပါရဲ့။ သေသွားပြီးတဲ့ သူတယောက် ကတော့ ဝဋ်ကျွတ်သွားတယ်ပေါ့လေ ။ သူဘာမှ မသိတော့ ၊ မခံစား ရပေတော့ ဘူးပေါ့ ။ ဒါပေမဲ့ မသေပဲ ကျန်နေရစ်ရသူတွေ သေဖို့အလှည့်ကျ ပါမစ်စောင့်နေရင်း ကွယ်လွန်သူချန်ခဲ့ တဲ့ ၊ လွှဲထားခဲ့တဲ့ တာဝန်တွေကို ဆက်ပြီး လက်လွှဲယူ နေရတာ ၊ အတော်လေး စိတ် မသက်မသာ ဖြစ်ရပါတယ် ။ တပူပေါ် နှစ်ပူဆင့်တယ် ဆိုတာတောင် နည်းသေးတယ် ဆိုရမလိုပါပဲ ။ကျန်ရစ်သူမိသားစုမှာ သူ နေမကောင်းစဉ်ပြုစု ကုသရတဲ့ စရိတ်စက ၊ ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို မြေကျတဲ့ အထိ ကုန်ကျရတဲ့ စရိတ်စက ဆိုတာတွေ က နှစ်ပူဆင့်ရုံတင်မက ၊ တချို့ များဆို အိမ်ပေါင် ယာပေါင်၊ အိမ်ရောင်း ယာရောင်း နဲ့ဘဝ ပျက်သွားခဲ့ကြတာတွေလည်း ရှိပါသေးရဲ့။
လူဆိုတာ သေမျိ်ုးချည်းပဲ မို့သေရတာ ဟာ မဆန်းပါဘူုး ။ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာ လူလိုနေပြီး လူလိုသေရဖို့အခွင့်အရေးကို လူတိုင်း ၊လူတိုင်း တန်းတူ မရနိုင်ကြတာတွေ က ဆန်းနေပါတယ် ။ စိတ်သဏ္ဍန် မရှိတော့တဲ့ကျန်ရစ်နေတဲ့ ရုပ်ခန္ဓာ ကြီး ကို လည်း လဒစား၊ ကျီးထိုး၊ ခွေးဆ၊ွဲ ဒီအတိုင်းပစ်ထားလို့မရပါဘူး ။ လူပီသအောင် လူလိုသူလို စီမံပေးရမှာပါ ။( နာဂစ်မှ တွေ့ ကြုံ ကြားသိရတာများကို လူစိတ်ရှိသူတွေ မေ့ လို့ရမှာ မဟုတ်ကြဘူး လို့ယုံကြည်ပါတယ် ) ။ ဒီတော့ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ရုပ်ကလပ်ကို လူကျင့်ဝတ္တရား နဲ့အညီ ။ ကိုးကွယ်ရာဘာသာ ထုံးစံဓလေ့များနဲ့ အညီ သင့်တင့် လျှောက်ပတ်ရာ အရပ်တခုမှာ သဂြိုလ်ပေးခြင်းအမှု ကိစ္စကို ဆောင်ရွက်ပေးကြရမှာပါ ။ ရှေးယခင် ( နှစ် ၂၀ တောင် မပြည့်ခဲ့သေးတဲ့ အချိန်ထိမှာတော့ ရန်ကုန်မြို့ ကြီးမှာ ရှိနေတဲ့ရွှေဂုံသူ ရွှေဂုံသားတို့ဘဝ နိဂုံးမှာ လှဲလျှောင်းနားခို စရာ နေရာ သုဿန် သင်္ချိုင်းများဟာ မြို့ နဲ့မဝေးကြတဲ့ နေရာတွေမှာ ရှိခဲ့ကြပါတယ် ။ ကြံတော ၊ နာနတ်တော ၊ တာမွေ ၊ ပြီးတော့ကိုးမိုင် တရုပ်သင်္ချိုင်း တွေ အစရှိသဖြင့်ပေါ့ ။ဒီနေရာတွေဟာ သွားရ လာရ အဆင်ပြေနေပါတယ် ။ကားခတွေလည်းခုလို မတရားကြီး ဈေးမကြီးသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် အချိန်ခါ မရွေး လိုက်လံ ပို့ ဆောင် အသုဘ ရှု ဖို့။ လူမှုရေး အရ ကြည့် ရင်လည်း ဝတ္တရား မပျက်ကွက် စေတဲ့ သဘောနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ၊ ကွယ်လွန်သူတို့ ရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကို လိုက်လံ ပို့ ဆောင် ပေးလေ့ရှိခဲ့ကြ ပါတယ်လေ ။ လူချစ်လူခင်များတဲ့ နာမည်ကြီးသူများနဲ့ နိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်များရဲ့ ဈာပန မျိုးဆို တိုးမပေါက်အောင် ကြိတ်ကြိတ်တိုး စည်ကားခဲ့ ကြတယ် ။တခါတရံများဆို ရန်ကုန်ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီး ရေခဲတိုက်မှ စပြီး အသံလွှင့်ရုံ နောက်ဖက်မှာ ရှိခဲ့တဲ့ကြံတော သုသာန်ထိ အသုဘ ပို့ ကားတန်းကြီးများ ရှည်လျား ခဲ့တယ် ။
နောက်ပိုင်းတော့ တိုးချဲ့လာတဲ့မြို့ အနေအထားကြောင့် သင်္ချိုင်း တွေကို အလှမ်းဝေးတဲ့ မြို့ ပြင်ပ သို့ရွှေ့ပြောင်း ကြရပါတယ် ။ ဒါကလည်း သိပ် အကြောင်းမဟုတ်သေးပါဘူး ။ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ လုပ်ရပ်ပါ ။ခေတ်နဲ့ အညီ ခေတ်မှီ ရွှေမြို့ တော်ကြီး အဖြစ်တတပ်တအား တည်ဆောက်ကြတဲ့ စီမံကိန်းတွေထဲ မှာ သင်္ချိုင်းရွှေ့ ပြောင်းရေး ဟာလည်း တခုအပါအဝင်ပေါ့ ။ မှတ်မှတ်ရရ ပဲ ဆိုရမလား၊ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ လားတော့ မသိ ၊ ဒါဟာလည်း ၈၈ ခုနှစ်အုံကြွမှု ကြီး အပြီး ၊ လှုပ်ရှားမှု အများဆုံးလို့စံတင်ရလောက်တဲ့ပစ္စည်းမဲ့ လူတန်းစားတွေ ကို မြို့ပြင်ထုတ်တဲ့ စီမံကိန်းတွေ နဲ့တူတူ တချိန်တည်းမှာ ကားစိမ်းစိမ်းကြီးတွေ နဲ့ ညသန်းခေါင်မှာ သင်္ချိုင်းပြောင်းရွှေ့ တာလည်း ပါခဲ့တယ် ။( ပြောင်းရွှေ့ တဲ့ အချိန်တုံးက ကြုံတွေ့ ရတဲ့အံ့သြစရာ အဖြစ်ကို နောက်ကြုံမှ သပ်သပ်ပြောပြပါအုံးမယ် ) ။ ဒီလိုနဲ့ ပဲ သုသန်ပြင်တစ ဟာ ရေဝေး ၊ ထိန်ပင် ။ စတဲ့ နေရာတွေ မှာ တည်ရှိခဲ့ရတော့ ပါတယ် ။ သူတို့ ၂ ခုဟာ ရွှေမြို့ တော်ကြီးရဲ့အဓိက တစပြင် ပေါ့ ။ အဲဒါကို ကိုယ်မြှုပ်ချင်တဲ့ နေရာ ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်လို့ မရပါဘူး ။ ရန်ကုန် အရှေ့ ပိုင်း ကလူတွေအတွက် ရေဝေး နဲ့အနောက်ပိုင်း အတွက် ထိန်ပင် ဆိုပြီး သတ်မှတ်ထားပါတယ် ။ လိုချင်တဲ့ အရပ်မှာ မြှုပ်ချင် သင်္ဂြုလ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ထုံးစံအတိုင်း နားလည်မှု တွေနဲ့ ခြင်္သေ့တွေကို လမ်းခင်းရင်တော့ ဖြစ်တာပေါ့လေ ။
ဒီလို မြို့ပြင်ဖက်ဝေးလံတဲ့ နေရာတွေရောက်သွားကြတော့ ကျန်ရစ်တဲ့ ရုပ်ကလပ်ကို သယ်ယူပို့ ဆောင်ရေးက အဓိက ပြသနာ ဖြစ်လာရတော့ တာပါပဲ ။ရန်ကုန်မြို့ ရှိ အသီးသီးသော ဆေးရုံများမှ ၊ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်အိမ်မှာဆုံးပါးသွားသူများရဲ့ ရုပ်ကလပ်တွေကို သက်ဆိုင်ရာ ရေခဲတိုက်တွေဆီ ပို့ရတဲ့ ခရီးစရိတ် ၊ ဟာ သောင်းနဲ့ချီပါတယ် ။ ဒါကို မတတ်နိုင်ကြတဲ့ လူတွေ ၊မျက်နှာမွဲ နင်းပြားတွေ ၊ တနေ့စာ တနေ့ တောင် အလျဉ်မမီနိုင်ကြတဲ့ အလုပ်သမားတွေ ၊ယုတ်စွအဆုံး အစိုးရဝန်ထမ်းတွေ အများကြီး ရှိနေကြတယ် ၊ ဒါကြောင့် နေရတာခက်တဲ့ အပြင် သေရတာလည်းခက်လှ တဲ့ သူတို့တတွေရဲ့ဒုက္ခများကို အတတ်နိုင်ဆုံး ကူညီဖြေရှင်း ပေးဖို့ အတွက် နာရေးကူညီမှုအသင်းကြီးကို ၂၀၀၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအတွင်း မှာစာရေးဆရာ ၊ ဒါရိုက်တာကြီး ဘဘ ဦးသုခရဲ့ လမ်းညွှန်မှု ဖြင့် ဦးကျော်သူ( အကယ်ဒမီ ရုပ်ရှင်မင်းသား) နဲ့ စေတနာရှင်များက ဝိုင်းဝန်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဆင်းရဲချမ်းသာနှင့် လူမျိုးဘာသာမရွေးဘဲ နာရေးကိစ္စများအတွက် အခမဲ့ ပို့ဆောင်သဂြုင်္ိဟ်ပေးခဲ့ပါတယ် ။ဒီအဖွဲ့ကြီး အနေနဲ့ လည်း ၂၀၀၇ ခုနှစ် မတ်လမှာ သုခကုသိုလ်ဖြစ် ဆေးခန်းများကိုပါ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ် ။ လေးစားမိပါတယ် ဦးကျော်သူ ။
စေတနာ အရင်းခံပြီး ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ အပင်ပန်းခံ ၊ အနစ်နာ ခံ လုပ်ဆောင်ပေးနေကြတဲ့ နာရေးကူညီမှု အသင်းကြီးရဲ့ လိုအပ်မှု များကို စေတနာရှင် ပြည်သူများ ပြည်တွင်း ပြည်ပမှ အလှုရှင်များက ထက်သန်စွာ ပေးလှူ ခဲ့ကြတာနဲ့ အမျှ ဒီအသင်းကြီးရဲ့ဂုဏ်သတင်းဟာ ကောင်းသော ကျော်ကြား မှုများနဲ့သတင်းမွှေးလာခဲ့တာ သဘာဝကျပါတယ် ၊ ဒါကို မနာလို မရှုစိမ့် ၊ သူတွေ ရှိလာရတာဟာတော့ အတော်လေး အံ့သြစရာ ကောင်းလှတယ်ပေါ့ ။ တကယ်ဆိုရင် တိုင်းပြည်ရဲ့အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများမှ လုပ်ဆောင်ပေးသင့်တဲ့ ဒီလို ကိစ္စရပ်များကို ၊မိမိကိုယ်တိုင် မစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ လိုအပ်ချက်များအား ပရဟိတစေတနာ အဖွဲ့ အစည်းများမှ ပံ့ပိုးပေးနေတာတွေကို လက်ခံ ကြိုဆို သင့်တယ် မဟုတ်ပါလား ။ ခုတော့ ရန်သူသဖွယ် မှတ်ယူနေသလားလို့ထင်ရလောက်အောင်ကိုပါပဲ နည်းမျိုးစုံ နဲ့ ပြသနာ မျိုးစုံ ဖန်တီး နှောက်ယှက် နေပါတော့တယ် ။ ဒီ နာရေးကူညီမှု အဖွဲ့ ကြီးရဲ့အခမဲ့ အသုဘ ပို့ ဆောင်တဲ့ အလုပ်ကို သူတို့ ဝင်ရောက် ချယ်လှယ်ခဲ့တယ် ။ အခကြေးငွေ ယူတဲ့ သူတို့အသုဘ ယာဉ်ကို မသုံးရင် လူသေကို သင်္ချိုင်း ပို့ ဖို့လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေ ထုတ်ယူဖို့ကြံ့ ကြာစေခဲ့တယ် ။နောက်ထပ်တမျိုး တိုး တာက ၊နာရေးကူညီမှု အသင်းကြီးပိုင် နိဗ္ဗန်ယာဉ်တွေ ကို မြို့ ထဲ ည မအိပ်စေရဘူးတဲ့လေ ။ရေဝေးသုသာန် နယ်မြေထဲ ရွှေ့ ပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။ တယ်လည်းခက်ပါလားကွယ် ။.သြော်ဒုက္ခပါလား မနာလို မစ္ဆရိယ ။ မစားရတဲ့အမဲ သဲနဲ့ ပက်တာလား ။အာဏာရှင်က မေတ္တာ ရှင်တွေ ကို မသိစိတ်နဲ့ရော သိသိကြီးနဲ့ ပါ ကြောက်တာလား ။
ခုလည်းနောက်တမျိုး ၊ ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်ကို နည်းမျိုးစုံ ရမယ်ရှာပြီး တရားစွဲ နှောက်ယှက် ဦးမယ် တဲ့လေ ။ကြံဖန် ရမယ်ရှာတာက ဆေးခန်းရှေ့ မှာ ရေမြောင်းမတူးလို့ ဆေးခန်းဖွင့်ဖို့အမိန့် မချပေးပဲ ၊ အမိန့် မရှိ ဆေးခန်းဖွင့်လို့ ပါတဲ့ ။ အရပ်ထဲက လမ်း ၊ တံတား ။ ရေမြောင်းတွေဆိုတာ ကို တူးဖေါ်ဆောက်လုပ်တာဝန်ရှိသူတွေ ဟာ အစိုးရ စည်ပင်သာယာရဲ့လုပ်ငန်း တာဝန် မဟုတ်ပါပဲလား ။ ဆေးခန်းကို အားကိုးတကြီးလာပြကြတဲ့ လူနာတွေ ကို မျက်နှာလွှဲ ခဲပစ် နေရတော့ မှာလား ၊။ သူတို့ပိုင်ရာ ဆိုင်ရာ လူကြီးတွေဖွင့်ထားတဲ့ နာမယ်ကြီးဆေးရုံကြီးတခုဆို လိုင်စင်မရခင် နှစ်များစွာကတည်းက ခန်းခန်းနားနားကြီးဖွင့်ထားလို့ ရတာကို ကျ ဘယ်သူမှ တရားမစွဲရဲပါလား ။
သာရေးလည်းမရ ၊ နာရေးလည်းမရ ။ နေရခက် ၊ သေရခက် ။ဆိုတော့ ဝေရမလား ၊ ကြွေရမလား လို့ တောင် မဆုံးဖြတ်တတ်တော့ ပါဘူး ။ နာတာလေးတော့ ခွင့်ပြုကွယ် ..ခွင့်ပြုစေချင်ပါတယ် ။
(ဦးကျော်သူ နှင့် ဇနီး ဒေါ်ရွှေဇီးကွက် နှင့် နာရေးကူညီမှု အသင်းကြီးမှ စေတနာရှင်များရဲ့ကုသိုလ်ဖြစ် လုပ်ဆောင်မှု များ အတွက် ဤစာလေးရေးပြီး အမှတ်တရ ဂုဏ်ပြု ပါတယ် ။ အမှန် တရား များ ၊ အောင်မြင်စွာ ရှင်သန်နိုင်ကြပါစေ )
ဒီနေရာလေး ၁ ၂ ၃ များ မှ ဒီသတင်းရ လို့ ပါ ။
:kiki : at 10/31/2009 03:08:00 PM
အနာခံမှ အသာစံရ ဆိုတဲ့စကားလေး လူတိုင်းသိကြမယ် ၊ အင်္ဂလိပ် တွေလည်း ပြောကြတယ် No Pain , No Gain ! တဲ့။အဓိပ္ပါယ်လေးက ရှင်းပါတယ် ။ ဒါတွေက ယျေဘူယျ ကျတဲ့ အခြေအနေတွေ မှာ မှန်နေတာပေါ့ လေ ။ သေချာစဉ်းစားကြည့်ရင် မှန်သလို မှားသလို နဲ့တွေတွေ ဝေဝေ ဖြစ်မိလို့ကိုယ့် ဦးနှောက် က ဇောက်ထိုး များ ဖြစ်နေပြီလားလို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်း မကြာခဏ ထင်မိသား ရယ် ။အနာခံမှ အသာစံ ရ လို့ ဆိုတော့ ၊ အနာ မခံရင် အသာမစံရတော့ ဘူးးပေါ့။ အနာခံတိုင်း ရော ၊ အသာစံ နေနိုင်ကြရဲ့ လား ။ အသာ စံချင်လို့အနာခံ နေကြတာလား ။အသာစံ နေတဲ့သူတွေ တိုင်း ဟာလည်း ၊ အနာခံ ခဲ့ ကြ လို့ လား ၊။ အကျိုးလိုလို့ညောင်ရေလောင်း ဆိုတဲ့ စကား အရ အကျိုးရှိမှ ပေါင်းကြတဲ့သူတွေ ကရော .. အနာခံပြီး လုပ်နေကြတာလား ။ဗေဒင် ယတြာ ကိန်းခမ်းတွေ နဲ့ အသာစံရအောင်လုပ်နေကြသူတွေ ကရော.. ။ သို့ လော ၊ သို့ လော နဲ့ ကိုယ့်မေးခွန်း ကိုယ်ပြန်ရှုပ် နေပြန်ပြီ idiot ရေ ။
ဒီတော့ ယျေဘူယျ ကျတာလေးတွေကိုပဲ တွေးပြီး ရေးပါတယ် ။ နှလုံးသားကို အဓိပ္ပါယ်ဖေါ်ဆောင်ရတာ ခက်ခဲလို့ပုံလေးကိုပဲ လွယ်လွယ်တွေး ပြီး ရေးပါမယ် ။ ကိုယ့်အယူအဆ နဲ့ ကိုယ်တော့ မှန်တယ်ထင်နေကြတာပါပဲ ။ တခြားသူတဦးက နောက်ရှုထောင့် တခုက ကြည့်ပြန်ရင်လည်း မတူညီတဲ့ အတွေးတွေ ရကြမှာပါ ။
လူတိုင်း လူတိုင်း ကိုယ့်ဝန်ကိုယ်ထမ်းပြီး ကိုယ့်လမ်း ကိုယ်လျှောက် နေကြရတယ် ။ကိုယ့်ဒုက္ခနဲ့ ကိုယ် ပေါ့ ။ မသေမချင်း ပန်းတိုင်မရောက်မချင်း လျှောက်ကြရတဲ့ ရှည်လျှားထွေပြားတဲ့ ဒီဘဝလမ်းမှာပါ ။
အချောင်ခိုချင်တဲ့ မောင်ခွေးတကောင် သူများလို ဒုက္ခများများမခံချင်ဘူး ။ တန်ခိုးရှင်ထံ ဆုတောင်းတယ် ။ဒုက္ခလေးလေးကြီး ပေါ့အောင် ဝိတ်လျှော့ ခြင်တယ်တဲ့လေ ၊ လူလည်ကြီး သားသမီးပါလား ၊
ပါမစ်ရပြီ ။ ဖြတ်တယ် ကွာ။ ဟဲ ဟဲ ၊ ဟို ငတုံးတွေ ငါ့လောက် ဥာဏ်မရှိကြဘူး ။မောင်ခွေးက သူ့ မှာရှိတဲ့ ဓါး အားကိုးနဲ့ ခပ်မိုက်မိုက်ပဲ ။
အင်း အခုမှပဲ ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး ဖြစ်သွားတယ် ။ တယ်တော်တဲ့ ငါပါလား ။
ဒုက္ခဝိတ်ကြီး လျော့သွားတော့ ပိုခရီးတွင်တယ်ပေါ့ ။
သူများတကာ မနိုင်ဝန်တွေ ခါးချိအောင်ထမ်းနေရချိန်မှာ မောင်ခွေးက ပေါ့ပါးစွာနဲ့ အီးဇီးဂိုးရင်း ။
ဒါနဲ့ တင် မကျေနပ်နိုင်သေးဘူး ။ သူများတွေလောက် မရှိတဲ့ ဒုက္ခသေးသေးလေးတောင် သူမခံစားချင်ဘူး ။နောက်ထပ် အခွင့်အရေးတခု ထပ်တောင်းဆိုတယ် ။ ရလေလိုလေ အိုတစ္ဆေ ။
သိပ်မရှိတဲ့ ဒုက္ခ ကို ပို နဲအောင် ထပ်ဖြတ် ။ ထပ်ဖြတ် ။
ဒီလိုနဲ့ သူ့ ဝန်တော်တော် ပေါ့သွားတယ် ။ ဒုက္ခနဲသွားအောင် ပါမစ်ထုတ်ပေး တဲ့ တန်ခိုးရှင်ကြီးကို ကျေးဇူးတင်သတဲ့ ။
သူများတကာ မနိုင့်တနိုင်ဝန်တွေ ထမ်းပြီး ပင်ပင်ပန်းပန်းလျှောက်နေတဲ့ အချိန် သူကတော့ သီချင်းလေးတအေးအေး နဲ့။
ဟမ် ... အခုမှ ဒုက္ခ တကဲ့ ဒုက္ခ ၊ ရှေ့ မှာ ဂျောက်ကမ်းပါး ၊ ဘဝ ကို အလွယ်တကူ ဖြတ်လာခဲ့သူ မောင်ခွေးတယောက် မဖြေရှင်းတတ်ပါ ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့ ။ နောက်ကျန်နေရစ်သူတွေ သူ့ ကို မှီလာပြီ ။
ဖြေးဖြေးမှန်မှန်နဲ့ လျှောက်လာတဲ့သူတွေ ဒီ ဒုက္ခ ကို အလွယ်တကူ ကျော်လွှားသွားနိုင်ကြပြီလေ ။
အတွေ့ အကြုံ မရှိတဲ့မောင်ခွေးတယောက် ဒီ ပြသနာလေးကို မဖြေရှင်း နိုင် ခဲ့ဘူး ။ ဘယ်သူမပြု မိမိမှုပါပဲ ။
ရေသာခို အချောင်လိုက်မိခဲ့တဲ့ မောင်ခွေး နောင်မှ တ တယ် ။ နောင်တ တဲ့ ။ ဒါကြောင့် အနာခံ မှ အသာစံရတယ် ဆိုကြတာပေါ့ ။ ကိုယ်တိုင်လည်း ဒုတိယ မောင်ခွေး မဖြစ်လိုပါ ။ ဒါကြောင့် လုပ်သင့် လုပ်ထိုက် တာ ကို သာတယ် နာတယ် သဘောမထားပဲ လုပ်ရ မှာ ပါ ။
No Pain , No Gain . Accept the PAIN .Future will become as your AIM .
လက်တဲ့စမ်းပြီးရေးကြည့် ပါတယ် ။( အတွေးတခု က မပြီးပြတ်သေးဘူး ၊ နောက်အတွေးတခု က ကြားဖြတ်ဝင်လာသေးတယ် ၊ ပြောရဦးမယ် ။ လူတွေက ယိုင်းပင်းကူညီချင်စိတ်တွေ မရှိကြတော့တာလား ၊ သူတို့ နည်းဟန်နဲ့ ဂျောက်ကမ်းပါးကြီး ကူးလို့ရနေရဲ့သားနဲ့ ၊ကူးပြီးသွားတဲ့ သူတွေ ထဲက တဦးတယောက်ကမှ မောင်ခွေးကို ဟိုဘက်ထိ ဘာလို့ မခေါ်ဆောင်သွားကြတာ ပါလိမ့်နော် ။ ကိုယ့် အသားလည်း ပဲ့ပါ မသွားပါဘူး ၊ ခဏလေးလောက် စောင့်ခေါ်လို့ မရနိုင်လောက် အောင်ကိုပဲ အချိန်တွေက အရေးကြီး တန်ဘိုး ရှိနေပြီ ထင်ပါရဲ့။ ဒါမှ မဟုတ် လူအချင်းချင်း ကူညီယိုင်းပင်းရမဲ့ ပရဟိတ စိတ်တွေ ခမ်းခြောက်ကုန်ကြပြီ ထင်ပါရဲ့)
သြော် ဘာလိုလို နဲ့ ဘလောဂ်ရေးတာ ဒီနေ့တနှစ်မြောက်တဲ့နေ့ ပါလားလေ ။ ဒီတော့လည်း ဘာမှ မထူးခြားတဲ့ ဒီနေ့ မှာ တစုံတခု ကို အမှတ် တရလေး ဖြစ်ခဲ့စေ လိုတဲ့ အတွက် ရေးသားပါတယ် ။ အနာခံ ပြီး အသာမစံ ရသော ကျွန်ုပ်ရဲ့ သူရဲကောင်းတယောက် အပါအဝင် တခြားသော အနစ်နာခံခဲ့သူများ ၊ အနစ်နာ ခံနေဆဲ သူများ အတွက် မရေမရာ အတွေးများ ကိုတော့ မဖျောက်နိုင်သေးပါဘူး ။ အနာခံမှ အသာစံရ ဆိုတာ လူသားအားလုံးအတွက် မှန်ကန်သော ဆိုစကားလေး ဖြစ်ပါရစေ လို့ မျှော်လင့်နေဆဲပါ ။
ပုံကလေးများကို သူငယ်ချင်းတယောက် ပို့ ပေးတဲ့ forward mail ထဲမှ ယူသုံးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မူလ ပုံရေးဆွဲသူကို လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ သူ့ အမည်နဲ့လိပ်စာမသိပါ၍ ဖေါ်မပြပေးနိုင်တဲ့ အတွက် ခွင့်ပြု နားလည်ပေးစေလိုပါတယ် ။
:kiki : at 10/30/2009 12:05:00 AM
လောကကြီးထဲမှာ ထူးခြားအံ့သြဘွယ်အဖြစ်တွေ အများကြီးရှိနေကြတယ် ။တချို့ က ကိုယ်တွေ့ မှ၊လက်တွေ့ မှ ယုံတယ်တဲ့။ ကြားစကားနဲ့ မယုံဘူးတဲ့ ။သိပ္ပံနည်းကျကျသာ တွေးခေါ်တယ်တဲ့။ ဒီလို သက်သေပြစရာ မရှိခဲ့တဲ့ အဖြစ်မှန်တွေ ဆိုရင် ရှေး ဒဏ္ဍာရီ အနေနဲ့ သာ ကျန်နေခဲ့ ကြရတဲ့အရာတွေလည်း မနည်းမနော ရှိခဲ့ မှာပါဘဲ ။ ရှေးကမ္ဘာဦးအစက ဒိုင်နိုဆောကြီးတွေ ရှိခဲ့တာ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းတွေကို သုတေသနပညာရှင်တွေက ပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ကြလို့သက်သေပြစရာ မှတ်တမ်းဝင် အထောက်အထားတွေနဲ့တကွ တင်ပြနိုင်ခဲ့ ကြလို့အများက လက်ခံ ခဲ့ကြတာပါ ။ မြန်မာ နိုင်ငံကြီးမှာလည်း ထူးခြား အံ့သြဘွယ်ရာ တွေ အများကြီး ရှိခဲ့ပါတယ် ။ ရှိနေပါတယ် ။ ဒါတွေကို စနစ်တကျ မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာမှာ မြန်မာ ဟေ့လို့ ဟစ်ကြွေးနိုင်စရာ တွေ အများကြီး ရှိလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။ဒီအထဲက မှ ထူးခြားဖြစ်စဉ် မှတ်တမ်းတိုလေး forward mail ထဲကရလာတာကို ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ် ၊ ( ဆားချက်တယ် လို့ ဆိုကြတယ် ဆိုရင် ဆားတမျိုးထပ်တိုးရအောင်လို့ ပဲ သဘောထားပေးပါ )
ရန်ကုန်ု မြို့ကျောက်မြောင်း ၊ သီတာလမ်း နှင့်အင်းဝလမ်းဒေါင့် အမှတ် ၄၃ နေ မောင်ထွန်းထွန်းနိုင် ဟာ ၁၃၇၁ တော်သလင်းလဆန်း ၁၂ ရက်နေ့( ၃၁/၈/ ၂၀၀၉ ) ညနေ ၅ နာရီ အချိန် မှာ . ပြည်မြို့တိုင်းပြည်လုံးချမ်းသာ ဆုတောင်းပြည့် ဆယ်ထပ်ရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီး၏ အရှေ့ ဖက် အောင်မြေ ရှုခင်းသာ လက်ရန်းမှ နေ၍ ဘုရားကြီးအား ဖူးမြှော်ရာ မှာ ဘုရားရှင်တော်မြတ်ကြီး ၏ မျက်ခုန်းတော် ၊ မျက်လုံးတော်များ လှုပ်ခပ်ခြင်း၊နှုတ်ခမ်းတော်များ လှုပ်ရှားပြီး တရားတော်မြတ် မြွက်ကြားသကဲ့ သို့ ဖြစ်ပေါ် နေခြင်း အစရှိတဲ့ ထူးခြား အံ့သြဘွယ်ရာများကို ဖူးမြှော်ရပါသဖြင့် ၄င်းရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်း နဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ ပါတယ် ၊အဲဒီ အများပြည်သူ ကြည်ညို ဖူးမြှော်နိုင်ရန် ပြုလုပ်ပေးထားသော ဗီဒီယို မှတ်တမ်းတိုလေးကို ထပ်ဆင့် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် ။ လက်ကိုင်ဖုန်းနဲ့ ရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်တာမို့ပုံများ သိပ်ကြည်လင်ပြတ်သားမှု မရှိပေမဲ့လည်း သေသေချာချာ ပုံကြီးချဲ့ဖူးမြှော်ပါက တကယ့် ကို ကြည်ညို စရာ၊ အံ့သြစရာ ကောင်းလှပါတယ် ။ဖူးမြှော် ကြည့်လိုက်ကြပါအုံး ။
:kiki : at 10/27/2009 01:00:00 PM
E အကြောင်းတွေ ပဲ မွှန်နေတယ်လို့ ဆိုတဲ့ဆရာလေး ကိုတောင်ပေါ်သား ဆက်ဖတ်ရန် E ဇာတ်လမ်းလေး ထပ်ဖြည့်ပေးလိုက်တယ်နော် ။
ခုခေတ်ကြီးထဲမှာ ပြည်မြန်မာမှာ ရွှေပြည်သူ ရွှေပြည်သား အများအပြား ပြည်ပ ထွက်ပြီး ပညာရှာကြ ၊ ဥစ္စာ ရှာကြ ၊( တချို့ လည်း ကြင်ယာ ရှာဖို့ ) ၊ တချို့ က ရှော့ပင်းထွက်ဖို့။ တချို့က ဘုရားဖူး ၊ တချို့က လိပ်ဥလည်းတူး ဖို့ ရည်ရွယ်ချက် အမျိုးမျိုးနဲ့ ပေါ့လေ ။
ဒီ အထဲက ဥစ္စာ စီးပွား ရှာဖို့ ထွက်လာကြတဲ့သူ အကြောင်းဘဲ ပြောချင်ပါတယ် ။ ကိုယ့် အကြောင်း နဲ့ ဆိုင်တဲ့ကိုယ့်အကြောင်းထဲက တကြောင်းပေါ့နော် ။သူများအကြောင်းကို မကောင်းတာ ပြောရင် အတင်း လို့ ဆိုကြတယ် ။ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ် မကောင်းကြောင်း ပြောတော့ အတင်း မဟုတ်တော့ဘူး ။ သတင်း ဖြစ်ချင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လေ ။
ကိုယ် နုံကြောင်း အ ၊ ကြောင်းပြော ပြန်ရင်တော့ ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်း ၊ ဒါမှ မဟုတ် ကိုယ့်ငချဉ် ကိုယ်ချဉ်တာလား တခုခုပေါ့နော် ။ ဒီလိုရှိတယ်လေ ဒီလို ...
လူတိုင်း လူတိုင်း နီးပါး လောက်က ပြည်ပ ထွက် အလုပ် လုပ်ရင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အခွန် တော်ငွေတွေ နဲ့ နိုင်ငံတော်ကို ပြန်လည် ကျေးဇူးဆပ်ကြရတယ်လေ ။ ၈% တို့ ၊ ၁၀ % တို့ ပေါ့ ။ ပိုတဲ့ ပိုက်ပိုက် လေးတွေ လည်း မိဘ၊ မောင်နှမ ၊ ဆွေမျိုး များ ဆီ ကို ကိုယ့် အသိစိတ် နဲ့ ကိုယ် ၊ ဒါမှ မဟုတ် ဝတ္တရား အရ ၊ ဒါမှ မဟုတ် မလုပ်မဖြစ်တဲ့ အခြေအနေ အကြောင်း ကြောင်းတွေ ကြောင့် ပြန် ပြီး ပေးပို့ ကြတာပေါ့ ။
ကိုယ် ထွက်လာခါ နီးမှာ သူငယ်ချင်းတယောက်က အကြံတော် အပေးကောင်းတာနဲ့မြန်မာ့ နိုင်ငံခြားငွေ ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဘဏ် မှာ ဂျွိုင့် အကောင့် တခု ဖွင့်ထား ခဲ့တယ် ။ အမေ့နာမယ် နဲ့ တွဲထားတယ်ပေါ့လေ ။နားမလည်သေးတဲ့ အချိန်ဖြစ်လို့အိမ် က အမေ သုံးပါစေတော့ ဆိုပြီး ရှိစု မဲ့ စု လေးထဲကနေ အစိမ်းလေးတွေ အသွင်ပြောင်းပြီး ပို့ လိုက်ပါတယ် ။ အဲဒီအချိန် ကလည်း တယ်လီဖုန်းလျှောက်ရင် ၊ မြန်မာပြည်ကြီး ထဲ မှာ ဘာညာ ကွိကွ ဝယ်ရင် အစိမ်းတို့။ ဆီ ( အက်ဖ်အီးစီ ) တို့ နဲ့ မှ ရတယ် လို့ဆိုတော့ လဲ အရေးအကြောင်း သုံးရ ၊ပြုရအောင်ပေါ့ လို့လွယ်လွယ်လေး တွေးလိုက် မိတာ ကိုး ။( ဟွန်ဒီ ဆိုတဲ့ဝေါဟာရ နဲ့အသုံးဝင်ပုံ ။ အသုံးတည့်ပုံ တွေ အကြောင်း အဲဒီ အချိန်က လုံးဝ နားမလည် သေးတာမို့ ၊ ရိုးရိုးကြီးဘဲ တွေးပြီး အဲဒီ ဘဏ်ကြီးကို အဟုတ်ကြီးထင်ပြီး ပုံအပ်မိပါတယ်။ ဟဲ ဟဲ .. စာကြီး ပေကြီးများ ဖြစ်လေ မလားဆိုပြီး ... ကြီး ... တွေ တွင်တွင်သုံး ကြည့်လိုက်တာ ဖတ်လို့အတော် ခက်မယ်နော် ။ )
ဒီလိုနဲ့အတိုး မရှိ ၊ မပေး၊ မရ ၊ တဲ့ ကိုယ်တို့အမိတိုင်းပြည်ထဲက နိူင်ငံခြားငွေ စုတဲ့ဘဏ် ဆိုတာ ကြီးထဲမှာ အဲဒီ စိမ်းစိမ်းလေးတွေ သွားအိပ်ခိုင်းထား မိတယ်ပေါ့ ။အံမလေး ။သူ တို့ ကိုတောင် ကြံဖန် ပြီး ပြန်ကျေးဇူး တင်ရပါအုံးမယ် ။ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခ မပေးရတာဘဲ ။
ဒီလိုနဲ့ ၂ နှစ်ကျော် ကြာသွားခဲ့ တယ် ။ ဦးဆုံး အကြိမ် အိမ်ပြန်ဖြစ်တာ ကလည်း ပျော်ရွှင်စွာ ပြန်ရတာ မဟုတ် ။ အဖေ ရုတ်တရက် ဆုံးသွားတာနဲ့ဗြုန်းစားကြီး ပေါ့ ။ နိူင်ငံခြားက ပြန်တယ်ဆိုတော့ ရွာ အဝင်ဂိတ် မှာ ထုံးစံအတိုင်း ရစ်တယ်ပေါ့ ။( လွန်ခဲ့ သော ၁၀ နှစ်ကျော် အချိန် က ပါ ) ။ ခွင့်စာ တို့၊ အခွန် ဆောင်ပြီးကြောင်း စာရွက်တို့။ ဘာတွေမှန်းမသိ ။ ရုတ်တရက်ဆိုတော့ ခွင့်စာလည်း မယူ လာမိ ။ အခွန်ကတော့ ဘာရယ်မှန်း မသိ ၊ မသိစိတ်ကဘဲ ကြိုသိ နေလို့ လား မပြောတတ် ။ အဲဒီ အချိန် မတိုင် မှီ တလလောက် ကဘဲ လိမ်မာစွာ နဲ့ တနှစ်စာ ကြိုတင်ဆောင်ထားပြီး အသင့် ရှိနေတာ။ ဒီလိုနဲ့ပေးကမ်းခြင်းသည် အောင်မြင်ရာ၏ ဆိုတဲ့ အဆို အရ အောင်မြင်စွာ အိမ်ပြန်ရောက်လာတယ်ပေါ့လေ ။
အဖေ့ ကိစ္စတွေ ပြီးတော့ ၊ ခွင့်ကလည်း ၂ ပါတ်ဘဲ ရတော့ ၊ အမေ စိတ်ပြေလက်ပျောက် ဖြစ်အောင် ကိုယ်ဆီ လာနေဖို့ကမန်းကတန်း စီစဉ် ရတယ်။ တပါတ် အလို မှာ အမေ့ အတွက် လက်မှတ် ဝယ်မယ်ပေါ့ ။
ဒေါသ ကုမ္မာရ ဇာတ်လမ်းကခုမှ စ ပါတယ် ။ လက်မှတ် ဝယ်ဖို့အစိမ်းလိုတယ်တဲ့ ၊၊ အင် ။။ အို ။ ဘယ်လိုပါလိမ့် ။အစိမ်းမရှိသူ ဘယ်လို ဝယ်ကြမလဲ ဆိုတော့ ဒီလိုဘဲ အပြင်မှာ ပြန်လဲ ပြီးဝယ်ကြပါတယ် တဲ့။
အမေ က အကြံပေးတယ် ။ သူ့ ဟို ဂျွိုင့် ကြီးကောက်ပြီးထဲ့ ထားတာ လဲ ဖုံး တခါ ဝယ်ပြီးတည်း က ဘာမှ မသုံး ဖြစ် ။ အဲ ဒီ ထဲ ကနေ ဝယ်လိုက် ပါလား တဲ့ လေ ။ အင်း ဒီလိုတော့လည်း ဟုတ်ပေသားဘဲ ၊ အဲဒီထဲ မှာ အလကား သွားအိပ်နေတဲ့စိမ်းစိမ်းကောင်လေးတွေ ၊ကြာလေ အဖိုးမဲ့အဖွားမဲ့ ဖြစ် နေ မစိုးလို့ ကျောက်တိုင်ကြီး ရှေ့ က ဖေါရိန်း အိပ်စ်ချိန်း ဘဏ်ကြီး ဆီ အပြေးအလွှားသွား ပေါ့ ။ အသွင်း နေရာ က လူ ရှင်း နေတယ် ။ အထုတ် နေရာက လူကြိတ် ကြိတ် တိုးနေတယ် ။
အထဲ က မ မ တွေကတော့ အပြင်က လူတွေ ဘယ်လောက် များများ ၊ ဆင်မယဉ်သာ ဟန်လေးနဲ့ ဗျား ။ အဲဒီထဲ က ဆင်မလေး တယောက်ကို အတင်းပြူးပြဲ ရှာပြီး မေးကြည့်တော့ ငွေ ထုတ်ဖို့အကြောင်းအရာ ။ သုံးမဲ့ နေရာ လျှောက်လွှာ တင်ပါ တဲ့။
အင်းလေ ။ သူ တို့ ထုံး စံ။ တင်ဆိုလည်း တင်ရတာပေါ့ ။ လျှောက်လွှာ ဆိုတော့ ပုံစံတော့ ရှိရမှာပေါ့လေ ။
ဒါနဲ့ အမ လတ်က( အဲဒီအချိန် သူ ရှိနေသေး တယ် ။ သူက စေ့စပ် သေချာတယ် ၊ ရုံး အလုပ် လုပ် နေကြ ဆိုတော့ ရုံး အထာတွေ အားလုံး နော ကျေ ပြီးသား ။ကိုယ် ပြည်တော်ပြန်တိုင်း သူဘဲ အမျိုးစုံ လိုက်လုပ်ပေးလေ့ ရှိတာ ၊ လွမ်းမိပါတယ် အမရယ် ) ။ အမလတ်က သူ့ ဖိုင်တွဲ ထဲ အဆင်သင့် ယူလာတဲ့ဖူးလ်စကပ် ပေပါ ဝါကျင်ကျင်လေးတွေ နဲ့ လျှောက်လွှာ ရေးရမဲ့ ပုံစံ နမူ နာ ကို နံရံ မှာ ကပ်ထားတာ တွေ အပြည့် အစုံ ကူးရေး ပြီး ၊ ကိုယ့် လက်မှတ်ထိုးပေါ့ နော် ။ ပြီးတော့ ဆင်မလေး တကောင် ဆီ တင် ပေါ့ ။
မန်နေဂျာ ကြီးနဲ့အထက်က လူ တွေ အဆင့်ဆင့် လက်မှတ် ထိုး ရမှာ ဆိုတော့ နောက် ၃ ရက် နေမှ ပြန်လာပါတဲ့၊ ဒါတောင် အစိမ်းလေးကို cash အနေနဲ့ပြန် ထုတ်ပေးမှာ မဟုတ်ဖူး နော် ။ ချက်လက်မှတ် လို စာရွက်လေးပဲ ထုတ်ပေးပြီး လေယာဉ်လက်မှတ်ရောင်းတဲ့ နေရာမှာ သွား ဝယ်ရမှာတဲ့ ။
ဒီတော့ အမက မုန့်ဘိုး ၊ပဲဖိုး ၊ ဘာညာ ကွိကွ ပေး လိုက်မယ်ပေါ့ ။ ဒီတော့ ဘေး က ကိုယ်လည်း ဘာမှ အထာ မပေါက် ။ အမ ကိုတောင် စိတ်ဆိုးပြီး ပြော မိသေးတယ် ။ ဒါ သူတို့ လုပ်ရမဲ့ အလုပ်ပဲ ၊ ဘာလို့ ပေး ရ မှာလည်းပေါ့ ။ ကိုယ့် အမက လည်း အရွဲ့ တိုက်ပြီး .. အဲဒါ ဆို နင့်ဟာနင် စောင့်ကြည့်ပေါ့ တဲ့။ တဇွတ်ထိုး ကိုယ် နဲ့ရွဲ့ တဲ့ အမ တို့ဘယ်သူ နိုင်မလည်း စောင့်ကြည့်အုံး မဟဲ့ လို့ ။လျှောက်လွှာတင်ပြီးပြန်ခဲ့တယ် ။
၃ ရက်ဆို တာ ဘာမှ လည်းမကြာပါဘုး ။ ဟို ဒီ ကိစ္စ တွေလုပ်ရင်းနဲ့ချိန်းထားတဲ့ နေ့အဲဒီ ရုံးကို တခေါက်ထပ်သွားပေါ့ ။ ရောက်တော့ တနေရာ ထပ်ညွှန်လိုက်တယ်လေ ။ သူ့ရုံးကြီး ရဲ့ ဘေး အနောက်ဖက် ကို ကွေ့ ပတ် သွားတော့အနီရောင် ရုံး အိုလေး တရုံး ရောက်ရော ။ နောက်ထပ် ဆင်မလေးတယောက် ရှာပြီး အကျိုးအကြောင်း မေးရတာပေါ့ ။ တနာရီ လောက် စောင့်တော့ အဲဒီ ဆင်မလေး ပြန်ရောက်လာတယ် ။ ဒီဘက်ရုံး က မန်နေဂျာ ဒီ မနက် အစည်းအဝေး ရှိ နေလို့၊အမ တို့လျှောက်လွှာ က လက်မှတ် မထိုး ရသေး ပါဘူး တဲ့။ နေ့ လည် ၂ နာရီ ကျော်မှ တခါ ပြန်လာပါ တဲ့ .။ အမလတ် က ပြုံး ပြီး ကိုယ့်ကို လှည့်ကြည့်တယ်။
ခေါင်းမာတဲ့ ကိုယ်ကလည်း အရှုံး မပေးပါဘူး ။ နေ့လည် ဆိုလဲ နေ့လည် ပေါ့ ။ ဘာဖြစ် သလဲ ။ ဒါနဲ့အဖေ့ အတွက် ရွှေတိဂုံ ဘုရားပေါ်တက် ၊ဘုရား ရှစ်ခိုး ။ အမျှဝေ ။အလှူငွေထည့်။ ပြီးတော့ ဇီဝိတ ဒါန ဆေးရုံသွား အလှူငွေ ထည့် ၊ အမျှဝေ နဲ့ စိတ်လေးဖြေ ခဲ့ လိုက် ရတာ ...
ပြောထားတဲ့ အချိန်ရောက်တော့ အဲဒီ ရုံးနီလေးဆီ နောက်တခေါက် ၃ ခါမြောက် ချီတက် ဖြစ်တယ်လေ ။ ဟဲ ဟဲ ။ ဒီတခါတော့ အိုကေ ပြီပေါ့ ။ ငါနိုင်ပြီပေါ့ ဆိုပြီး အမ ကို ပြောတော့ နင့်လက်ထဲ အဲဒီ စာရွက် မရောက် မချင်း နင် မနိုင် သေးပါဘူး တဲ့။
ရောက်ပါပြီ ။ စောင့်ပါတယ် နာရီဝက် ။ စောင့်ပါတယ် တနာရီ ။ အဲ ..၃ နာရီ ခွဲ သွားပါပြီ ၊။ ဆင်မလေးတွေ က အထဲမှာ လှုပ်လီ လှုပ်လဲ့။ အိုးလေး တွေ လှုပ်လို့ ကောင်းနေကြဆဲ ။ ကိုယ့်မှာတော့ နေပူ ပူ နဲ့ရေဆူ မှတ် ကို တရိပ်ရိပ် တက်လာ ပါပြီ ။
အမ ကို လက်တို့ ပြီး သွားမေးကြည့် ပါအုံး ပေါ့ ။ အမ ကလည်း သိတယ် ။ ကိုယ် စိတ်တို စ ပြုနေပြီ ဆိုတာ ။ အပြင်က နေ လဖက်ရည် ဆိုင်သွားပြီး ပြန်လာတဲ့ပုံစံ နဲ့ပြုံးစိစိ မျက်နှာပေးနဲ့ပြန်ဝင်လာတဲ့မနက်က ဆင်မလေး ကို တွေ့ တော့ အမလေ ။ အပြေးလေးသွားပြီး လိုက်မေးရတာ ။
ဒီတော့မှ" ဪ. အမ တို့ပြန်ရောက်နေကြပြီလား "တဲ့။ "ခဏလေးစောင့်ပါအုံး နော်" တဲ့။ မန်နေဂျာ အခန်းထဲ ဝင်သွားပြီး လျှောက်လွှာ စာရွက်ကို လိုက်ရှာ နေလေရဲ့။
ကိုယ့် မျက်စိ ကလည်း ဒီလို မဟုတ်တဲ့ နေရာမျိုး ဆို လျှင်သမှ ပြောမနေနဲ့တော့။
အဲဒီ ဆင်မလေး မနက်က ထိုင်တဲ့ စားပွဲ ရဲ့ အောက်ဆုံး မှာ ရောက်နေတဲ့ ကိုယ့်လျှောက်လွှာစာရွက်လေး ( ကလစ်ပင် အနီရောင်နဲ့ ထိုးပြီး နောက်စာရွက်တခု ကို ဘယ်ဘက် ဒေါင့်စွန်းအပေါ်မှာ ညှပ်ထားတာ ဆိုတော့ သိသိ သာသာ ပါဘဲ ) မြင်လိုက်ရတယ် ။
ရေဆူမှတ် ရောက်ဖို့၂ ပွိုင့် ဘဲ လိုပါတော့သည် ပေါ့ ။
ဒီဆင်မလေး မရောင်မလည် ပြန်ထွက်လာပြီး ဟိုရှာ ဒီရှာ နဲ့။ ဒါနဲ့အချိန်ကုန် မခံချင်တော့တဲ့ ကိုယ် ။ သူ့ စားပွဲ ရှိတဲ့ နေရာ လျှောက်ဝင်ပြီး ကိုယ့်လျှောက်လွှာ ကိုယ်ပြန် ရှာပြရတယ် ။
"ဪ ..အမရယ် ။ အားနာ ပါတယ်၊ ဒီနေ့အချိန် မရှိ တော့လို့ ၊မနက်ဖန် မနက်စောစော မှ တခေါက်ပြန်လာယူ ပါလား" တဲ့။
အဲ .. မနက်ဖန် ဆို သောကြာနေ့။ကြားမှာ ၂ရက်ဘဲ အချိန်ရှိတော့တာ ။
ရေဆူ မှတ် ၉၉ ရောက် နေပြီ ။ စိတ်ထိန်း ၊ စိတ်ထိန်း ။ ဒါဆိုလဲ မယူတော့ဘုး ၊ အပြင်မှာ ဝယ်မယ် ၊ ချက်ချင်းရတယ် လို့တခွန်းဘဲပြော ပြီ ထွက်လာလိုက်တယ် ။
နောက်ဆုံး သူထပ်ပြောတဲ့ စကားတခွန်းကြောင့် မဆူ သင့်တဲ့ ရေဆူမှတ် ကို ဒိန်းကနဲ ရောက်ရုံ မက ဟိုဘက် ဘူတာတောင် ရောက်သွား ခဲ့ ပါတယ် ။
" နေ ပါ အုံး အမ ။ လျှောက်လွှာ မတင်တော့ဘူး ။ ငွေ ပြန် မထုတ်တော့ဘူး ဆိုရင် မထုတ် တော့တဲ့ အကြောင်း ကို လျှောက်လွှာ တခု ရေးတင် ခဲ့ ပါအုံး" တဲ့ လေ ။
ဒီတော့ ရေဆူမှတ် ကျော်နေပြီ ဖြစ်ချင်ရာ ဖြစ်တော့ ။ သူ့စားပွဲ ဆီ ပြန်လှည့် သွားပြီး သူ့လက်ထဲ က ကိုယ့်လျှောက်လွှာ စာရွက် ကို အားရ ပါးရ ဆွဲ ဆုတ် ပြီး ထွက်လာ ခဲ့ ပါတယ် ။ အဲဒီ အချိန် ကစပြီး နောက် ဘယ်တော့ မှ ဒီလိုရုံးထဲ မလာတော့ ပါဘူး လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက် မိတယ်။ ဆင်မလေး ကတော့ နောက်မှာ ပါးစပ် အဟောင်းသားနဲ့ကျန်ခဲ့ လေ ရဲ့ .......
အဝင်လွယ်၍ အထွက်ခက်သော ဤဘဏ်မျိုး ၊ နောင် တသက် မဟုတ် ၊ ဆယ်သက်စာ ဒိုးဆလံ တင်းဆလံ ပါ ။
E ခေတ်ကြီးထဲ မှာ ဤသို့ သော E လျှောက်လွှာ မျိုး အမြန်ဆုံး ပျောက်ကင်းပါစေ ။
( လွန်ခဲ့ သော ဆယ်နှစ်ကျော် က တကဲ့ ကိုယ်တွေ့အဖြစ် အပျက်လေး တခု ပါ ၊ စိတ် ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်း မဟုတ်ပါ ။နောက်တနေ့ မှာ အသင့် ရှိနေတဲ့ကက်ရှ် လေး နဲ့ သွားဝယ်တော့ လက်မှတ် က ချက်ချင်းရပါတယ် ။ ဪ ၊ နေရင်း ထိုင်ရင်း အချိန်ကုန် ၊ လူပန်း၊ စိတ်ပန်း နဲ့ ၊ မှားပါတယ် ၊၊ ပေးကမ်းခြင်းသည် အောင်မြင်ရာ ဆိုတဲ့ ထုံး နှလုံး မမူဘဲ ခေါင်းမာ မိလို့)
:kiki : at 10/20/2009 03:04:00 AM
ရန်ကုန်မြို့အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း ရပ်ကွက်တခုအတွင်း ဆိုက်ကားဂိတ်နှင့် မလှမ်းမကမ်း ကတ္တရာ မရှိသော ကတ္တရာလမ်းဘေး မြေကွက်လပ်တနေရာတွင် ရပ်ကွက်အတွင်းမှ အရွယ်စုံ အရောင်စုံ ကလေးငယ်များ ဆော့ကစားလျှက် ရှိကြသည် ။ ၄ တန်းကျောင်းသား အရွယ် မှ စ၍ ခါးထစ်ခွင်ချီ နှပ်ချီးတွဲလောင်း ကလေးငယ် ထိ အရွယ်စုံသည် ။ ပုံသဏ္ဍာန်လည်း စုံသည်ပေါ့ ။ ပိန်ပိန်ရှည်ရှည် သံချောင်း ၊ ဗိုက်ပူနံကား ချက်စူ ၊ အဖေ အမေ မြန်မာအစစ်ပေမဲ့မီးသွေးက အဘခေါ်ရလောက်အောင် မဲတူးချိတ်နေတဲ့ နက်တူ။ ပုကွကွ ဂင်တိုတို နဲ့ဒွေး ကို အလွန်ကြိုက်တဲ့ ခွေးညို ၊နှုတ်ခမ်းထော်ပြီး မဲ့ကာရွဲ့ ကာ မျက်စပြစ် ၍ သွက်သွက်လက်လက်နဲ့ထက်ထက်၊သူ့ ခါးထစ်ခွင်ချီထားတာကတော့ သူ့ ထက် ၄နှစ်လောက်ငယ်တဲ့ မောင်လေး စနေ သူလေးကတော့ စကားမပြောတတ်သေး ။နောက်တယောက်က အသားဖွေးဖွေး တရုပ်မလေး ပိုးအိစံ ။ ကလေးတို့ ဘာဝ ကျောင်းပိတ်ရက်တွေ တနေကုန် နဲ့ ကျောင်းဖွင့်ရက်တွေရဲ့ ညနေပိုင်းလေးတွေ မှာ ဆော့ကြကစားကြလေ့ ရှိကြတာ နိစ္စဓူဝ ထဲက အရေးကြီးသော ကိစ္စလေးများပေါ့ ။
ဒီနေ့ တော့ စနေနေ့ကျောင်းပိတ်ရက် မနက်ပိုင်း မှာ တော့ သူတို့ လေးတွေ ကိုယ်စီ မအားကြရှာပါ ။ လက်လုပ်လက်စား မိဘတွေ ဈေးရောင်းတာ ။ အကြော်ဆိုင် မှာ ။ လဖက်ရည်ဆိုင် မှာ ကူညီ ပေးကြရသည် ။ ကံမကောင်းတဲ့ သံချောင်းမှာ အဖေမရှိရှာတော့ ၊မုဆိုးမ အမေက အကြော်ရောင်းပြီး ရှာကျွေးကာ သူတို့မောင်နှမ သုံးယောက်ကို ကျောင်းထားပေးရသည် ။ ဗိုက်ပူပူ ချက်စူ မှာတော့ မိဘ စုံလင်ပေမဲ့အဖေ အရက်သမား ၊အမြဲ မူး နေတာ ။ အမေက ဈေးရောင်းပြီး ဘဝကို ကျားကန် နေရသည် ။ ဒွေးကြိုက်လို့ ခွေးလိုက်တာခံရသော ခွေးညို ..အဖေဆိုက်ကားဆရာ ၊ အမေက ဟိုးတရပ်ကွက် အလွန်က အတော်အသင့် ပြေလည်သူတွေ အိမ်မှာ အဝတ်လိုက်လျှော်ပေးရင်း တက်ညီလက်ညီ အလုပ်ကိုယ်စီပေမဲ့တရက်တရက် အလျှင်မမှီကြရပါ။ဒီတော့ ဒွေးညို အဲ.. ခွေးညိုက အားလပ်ရက်မှာ ရက်ကွက်ထဲရှိ လဖက်ရည်ဆိုင်မှာ အကူလက်တိုလက်တောင်း အနေနဲ့ လုပ်ပေးရသည် ။ လဖက်ရည်ဆိုင်ဆိုတော့ လူစုံ ၊သတင်းစုံသည်။ ဆိုင်ထဲမှာ ထားရှိသော မဂ္ဂဇင်း ၊စာစောင်များထဲမှ ဒွေးပုံ ကိုကြည့်ပြီး ဒွေးကေ ထားချင်လို့အမေကို ပူဆာတော့ ခဝါသည် အမေက ဆတ္တာသည် အဖြစ် ချစ်သားလေးကို လက်စွမ်း ပြ လိုက်တာမှာ ဒွေးကေ မရ ပဲ ရှေ့ တလက်မ နောက်ပြောင် ဖြစ်သွားရှာသည် ။နက်တူ ဆိုတာကလည်း ပညက်သွားရာဓါတ်သက်ပါသည်ပေါ့ ။ သူ့ အဖေက ရပ်ကွက်ထဲမှာ မီးသွေးရောင်းသည် ၊ နွေရာသီဆိုလျှင် ရေလှည်းတွန်း၍ အိမ်တွေမှာ လိုက်ပို့ ပေးသည် ။ထက်ထက်ကတော့ ချက်ကနဲ ဆို နားခွက် မီးတောက် ၊ မျက်ကနဲ ဒက်ကနဲ နဲ့လက်ရဲ ဇက်ရဲ လည်း ရှိလှသူမို့ယောင်္ကျား လေးများတောင်သူနဲ့ကစားလျှင် ရှောင်လင်သိုင်း နင်းကြရသည် ။ သူ့ မောင်လေးကို ခါးထစ်ခွင်ချီထားရင်းနဲ့ တောင်မှ ကုလားမစည်း ကစားရင် ၂ကွက် ၃ကွက်လောက်က အသာလေး ခုန်ပျံကျော်လွှား နိုင်သည် ။ပိုးအိစံ ....သူကတော့ မိဘ က အနဲငယ်ချောင်လည်သည် ။ ရပ်ကွက်ထဲမှာ အပေါင်ဆိုင်ဖွင့် ငွေတိုးချေးစားတဲ့အလုပ်နဲ့မိဘနှစ်ပါးက ပေါက်ဖွားလာသူဆိုတော့ သူများအပေါ် နဲနဲတော့ တင်စီးချင်သည်။ဒါကြောင့် သူနဲ့ ကစားဖို့ကျန်တဲ့ သူငယ်ချင်းလေးတွေက အင်တင်တင် ဖြစ်လေ့ရှိသည် ။ဒါပေမဲ့ သူ့ မှာ စိတ်ရင်းကောင်းလေးတော့ ရှိသည် ။ သူ့ အိမ်မှ စားစရာများကို ဖွက်ယူလာပြီး သူငယ်ချင်းများကို ကျွေးတတ်သည် ။ဒီတော့လည်း ကျန်သူများက သူတို့အပေါ် အနိုင်ယူမှု များကို မုန့် မျက်နှာဖြင့် ခွင့်လွှတ်ထားကြသည် ။ ကလေးဆိုတော့ ရန်ဖြစ်ကြပြီးရင်လည်း တခဏပါပဲလေ ။ ဒီလို နဲ့ဒီရပ်ကွက်လေးမှာ ညနေတိုင်း ကစား ဝိုင်းလေးနဲ့စိုပြေနေကြတတ်သည်ပေါ့ ။အော်ဟစ်သံ ။ ငြင်ခုံသံများနှင့် တခါတရံတော့လည်း မနိုင်သူတွေရဲ့ငိုသံ ၊များနှင့်ပေါ့ ။
ဒီစနေ ည လည်း ထုံးစံအတိုင်း ဆော့ကစားရင်း ။ ငြင်းရင်း ၊ ငိုရင်း နဲ့ထုံးစံ အတိုင်းပဲ မီးပျက်သွားသည် ။ သူတို့သူငယ်ချင်းတသိုက်လည်း ဟေးးကနဲ ၊ ဝေးး ကနဲ ဝိုင်းအော်ကြရင်း မှောင်မဲမဲထဲ အသင့် ဆောင်ထားကြသော တုတ်များ၊ဒါးများဆွဲ ၍ တယောက်နှင့် တယောက် ရိုက်ကြ၊ ခုတ်ကြ ပါတော့သည် ။ အိမ်မှ ရရာဆွဲခဲ့ ကြပြီး လုပ်ထားကြတဲ့လက်နက်ပုန်းများပါ ။ သံချောင်းက အမေ့ အကြော်ဆိုင်မှ ထင်းချောင်းအတိုအစ ၃ ချောင်း ယူလာပြီး အပေါ်က အဝတ်စုတ် ပတ်ထားကာ လက်ကိုင်တုတ် အဖြစ် အသွင်ပြောင်းထားသည် ။တချောင်းက သူ ကိုင်ပြီး နောက်၂ ချောင်းက ချက်စူနဲ့နက်တူ တို့ ကို မဟာမိတ် လက်ဆောင် ပေးထားတာ ဖြစ်သည်လေ။သူတို့၃ယောက်က တဖက် ။ သူတို့ရဲ့ဂိုဏ်းနာ မယ်ကို လှလှလေး ရွေးထားလိုက်ကြသေးသည် ။ " စွမ်းအားရှင် " တဲ့လေ ၊ သူတို့ ဟာသူတို့ ထွင်ထားကြသော စွန်းဝူခုန်း နဲ့မျောက်မူး သိုင်းကွက် လေ့ကျင့်ရင်း မှောင်ထဲမှာ ထိုးစစ်ဆင်ဖို့အသင့် ရှိနေပြီ ဖြစ်သည် ။
တဖက်အသင်းကိုလည်းခွေးညို နှင့် မိန်းမသား ၂ယောက် ပါလို့အထင်သေး ၍ မရ ။ ထက်ထက်က လက်သံပြောင်ပါဘိနဲ့ ၊ တဖွဲ့ တည်းသား ခွေးညိုကတောင် အရှုံးပေးရသည် ။သူ့ ကိုယ်သူလည်း အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရှင် တဲ့။ပိုးအိစံကတော့ ပေသီးခေါက်တာ ကျွမ်းကျင်တော့ သူတို့၃ ယောက်ပေါင်းလောင်းကျော်တဲ့ကြံ့ ဖွတ် အသင်းရဲ့အတွင်းရေးမှူးနေရာ က တပြားမှ မလျှော့ ။ သူတို့ အဖွဲ့ ရဲ့လက်နက်တွေကတော့ ခွေးညို အဖေ ဆိုက်ကားဆရာ ဂွေလိမ်နေတဲ့စက်ဘီး ဂွေကို ဒိုင်းလုပ် ပြီး၊ ထက်ထက်တို့အိမ်စည်းရိုးက ဝါးခြမ်းပြားတွေကို ဒါးသဖွယ် လုပ်ထားလိုက်ကြသေးသည် ။ ခွေးညိုက တခါတလေ ဂျက်လီ ကွန်ဖူးသိုင်းနဲ့ ခုန်ပျံကျော်လွှားနေလိုက်သေးသည် ။
ဖုန်းးးး ဒိုင်း ။ .... ဒုတ် ... .. ခွပ် ..... ဖြန်း ...... တိန် ....
ဟေ့ကောင် ... မပြေးနဲ့... အသေသာဆော် ကွ .... တယောက်မှ မလွတ်စေနဲ့ .... ဆွဲ သာဆွဲ .. မှတ်ပလားကွ ငါတို့ ကို အာခံချင်တဲ့ ကောင် ... ကားပေါ်ဆွဲတင်ဟေ့ ။
အား .... အင့် ...... အမလေး ..... မွေးမေလေ့ .... ဟိုကောင် ငါ့ကို တကယ်ဆော်တယ်ဟ .... ဗြဲ .... အီးဟီးဟီး...
အမှောင်ထဲမှ တိုက်ပွဲက တစ တစ ပြင်းထန်လာသည် ။အော်သံ ချသံ ဆဲဆိုသံ များ နှင့် ...အတော်လေး အရှိန်ရနေစဉ် မှာ ....
အားးး ပိုးအိစံ ဆီမှ စူးစူးဝါးဝါး အော်ငိုသံကြားတော့မှ ၂ဖက်စလုံး အရိုက် အနှက် ရပ်သွားကြတော့သည် ။ ပိုးအိစံခေါင်းမှ သွေးများ တစိမ့်စိမ့် စီးဆင်းလာလို့လက်နဲ့အုပ်ပြီး လဲကျသွားတာ ကို လရောင်သဲ့သဲ့အောက်မှာ ဝိုးတဝါးမြင်လိုက်ရပြီး အားလုံး ကြောက်လန့် သွားကြပြီလေ ။ ခွေးညိုတယောက် အူယားဖါးယားနဲ့ ပြေးပြီး လမ်းထိပ် ဆိုက်ကားဂိတ်မှ သူ့ အဖေကို သွားခေါ် ။ ပိုးအိစံကို ဆိုက်ကားပေါ်တင် ပြီး နောက်တရက်ကွက်က ဆေးခန်းလေးဆီသို့ခေါ်သွားကြတော့မှ သူတို့ ကလေးတသိုက်ရဲ့ဆော့ပွဲ ရိုက်ပွဲလေး အဆုံးသပ်သွားရသည်ပေါ့ ။ ဒီနေ့ အဖို့မပျော်နိုင်ကြတော့ ။ အိမ်ပြန်ရောက်လျှင် ထပ်ပြီး အဆူခံရ အရိုက်ခံကြရ ဦးမည် မဟုတ်ပါလား ။
( ဆင်းရဲသား ပစ္စည်းမဲ့လူတန်းစား တွေ ရဲ့ရပ်ကွက်ထဲမှ ကလေးငယ်များရဲ့မီးမလာတဲ့ ညများ မှာ ကလေးတို့ ဘာဝ အတုမြင် အတတ်သင်ပြီး ရှာကြံကာ ဆော့ကြရတဲ့အကြောင်းလေး ကို စိတ်ကူးနဲ့ပုံဖေါ်ကြည့်မိထားခြင်း သာ ဖြစ်ပါသည် ။ သူများ တကာတွေလို မီးရောင်ထိန်ထိန်အောက်မှာ ကွန်ပြူတာ ၊ အင်တာနက် အပြည့် အဝ နဲ့ဂိမ်းဆော့ ခြင်း ။ အွန်လိုင်း စာပေ ပညာရှာဖွေ ရယူခြင်း ၊ ဆက်သွယ်ခြင်း စတဲ့အခွင့်အရေးများကို ငယ်ရွယ်စဉ် အခါမှာကတည်းက ဆုံးရှုံးနေကြရတဲ့ရွှေပြည်ကြီးမှ များလှစွာသော ကလေးသူငယ်များ အတွက် နုနယ်လှတဲ့ အတွေးများနဲ့ရှာဖွေ ဆည်းပူးသင့်တဲ့ ပညာအသိများ မှန်မှန်ကန်ကန် ရရှိနိုင်ကြဖို့တာဝန်ရှိကြသော ခေါင်းဆောင်ဟုမိမိကိုယ် မိမိ ဆိုနေကြ သောသူများ မှာ တော့ ဤအရာလေးများအား မမြင် မတွေ့မကြား မသိဖြစ်နေခြင်း ၊ မြင်တွေ့ ကြားသိပေမဲ့ လည်း ကိုယ့်တဘို့ သာကြည့်ပြီး လျစ်လျှုပြုထားခြင်းများအတွက် ရည်ညွှန်းပါသည် ။ တမင်တကာ တိုက်ဆိုင်မှုများ ရှိခဲ့ လျှင်လည်း အဟောသိကံ ကောင်းလေစွ ဟု မှတ်ယူပါသည်။ )
အကြောင်းရင်းကို သိချင်ရင်တော့ ... ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဒီလိုပဲ ရှိတယ်လေ .....
စွမ်းအားရှင်များ တုတ်ရိုက် လေ့ကျင့်
တနင်္လာနေ့၊ စက်တင်ဘာလ 28 ရက် 2009 ခုနှစ် 19 နာရီ 36 မိနစ်
ရွှေလီ (မဇ္ဈိမ)။ ။ ရန်ကုန်တိုင်း ကြည့်မြင်တိုင် မြို့နယ်တွင် ယခုတလော ညပိုင်းတွင် လျှပ်စစ်မီး အမှောင်ချကာ လမ်းများပေါ်တွင် စွမ်းအားရှင်များ တုတ်ရိုက်နည်း လေ့ကျင့် နေကြောင်း သံဃာတပါးက မိန့်ဆိုသည်။
သတင်းအပြည့်အစုံသိချင်ရင် ဒီင်္မှာ ရှိပါတယ် ။
ဒွေးညို နဲ့ ထက်ထက်တို့ရပ်ကွက်လေးထဲသို့လာကြည့်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် .....း)
:kiki : at 10/15/2009 10:17:00 PM
ခုတလော E အကြောင်းတွေ တွေးနေမိပြန်ပါပြီ ။ ဘူကနဲ ဘွမ်ကနဲ အသံကျယ်တဲ့ E က မနံဘူးတဲ့ ။ တယော လေးလို မျှင်းပြီး လူမသိအောင် လွှတ်တဲ့E က ပျော့ပျော့လေးနဲ့ နံတဲ့ကြောင် -ျီး လို ပါဘဲ တဲ့ ။ မပေါက်မကောင်း ပေါက်မကောင်း E တွေ အများကြီး ရှိပါသေးရဲ့။ ဒီနေ့ တော့ အချစ်တော်ကြီး ပေါသွပ် နဲ့ ပဲ ဆားချက်လိုက်ပါတယ် ။ ပဲခူးဆား နဲ့သိန္ဒောဆား ပေါင်းထားတယ် ဆိုတော့ အနဲငယ် နံ ပါမယ်.. အဲလေ .. ငံပါမယ် ။
အိုး မိုင်ဂေါ့ ...ခုခေတ်ကြီး မှာလေ .ကျားကျား မမ ပျိုပျို အိုအို မရွေး E တွေ စားသုံး နေကြပါလား နော် ။ဆေး ၊ အလှပြင် လိမ်းဆေး ၊စားသောက်ကုန် ၊ ဘယ်ပစ္စည်းမှာ မဆို E သာ ထည့် လိုက် ။ ရောင်းစွံပြီ ။ သူဌေုးဖြစ်ပြီ ။နေရာ တကာ မှာ E သတင်းမွှေး နေတာပါပဲလား ကွယ် ။
E အကြောင်း သေချာ မသိပဲ မျက်နှာလို မျက်နှာရ ၊ လေဒါန်း ဖမ်းဆီး ဖြီးချင် ရွှီးချင် လှသော ဇာတ်လိုက်ကျော်ကြီး သမိန် ပေါသွပ် ရဲ့ ကံကြမ္မာ မှာ ဤ သို့့ဖြစ်ပါလေသတည်း ။
E ပေါက်မယ်ဆိုလျှင်...နဲနဲတော့ သတိထားပါ ။
လူလစ်တယ်ဆိုပြီး ခိုးပေါက်မယ် မကြံနဲ့နော် ။
ခု လို E ခေတ်ကြီးထဲ မှာ အီး ဒီတက်တာ( E-detector ) တွေလည်း ရှိတယ် ဆို တာ ယုံကြည်စေချင်တယ် ( L -ဆိုင်းဇီ သီချင်း လေး ကို ပြောတာ မဟုတ် ) မယုံ ရင် စမ်းကြည့် ကြပေါ့ ။ အဟက် ...
ဩော် E ပေါက်တာ တောင် မလွတ်လပ်တဲ့ခေတ်ကြီးထဲ မှာလေ ....
E နံ့မွှန်နေသော ဤ ဘလောဂ် လောကကြီး မှာလည်း လူအများ ပါသင့် သော E နှင့် မပါသင့် သော E များ ခွဲခြား နိုင်ကြပါစေ ....
:kiki : at 10/14/2009 09:00:00 AM
ရေးတော့အမှန် ဖတ်တော့ အသံ ဟုဆိုကြသည် ။ မြန်မာ ဟုရေးပြီး ဗမာ ဟု အသံထွက်ကြသည် ။ တချို့ ကလည်းပြောကြပါသည် ။မြန်မာ နှင့် ဗမာ ဟူသည်မှာ အဓိပ္ပါယ် ကွဲပြား ခြားနား သည်ဟူ၍ .....ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှီတင်းနေထိုင်ကြသော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ အတွင်း ဗမာအား လူမျိုးစု တခု ဟု သတ်မှတ်သည်ဟူ၍ ။ သို့ ပါ၍ ဤစာပုဒ်ကိုရေးရာတွင် မြန်မာ ဟုသာရေးပါသည် ။တကယ် အသံထွက် ပြောဆိုရာမှာတော့ ဗမာ ဟုပြောခြင်းက ပိုပြီးအဆင်ပြေပါသည် ။ ဤစာပါအကြောင်းအရာ မှာ အဖြစ်အပျက်မှန်တခုကို အခြေခံတင်ပြခြင်းသာ ဖြစ်ပါ၍ ဗမာ သို့ မဟုတ် မြန်မာ ဆိုသော အသုံးအနှုံး အတွက် အချင်းမပွားကြစေလိုပါ ။ (ဤ စာရေးသူရဲ့ဦးစွာ အစီရင်ခံ ခြင်းပါ )
ကိုဘသောင်း၊ ကိုလှဘော်၊ ကိုသိန်းမောင်၊ ကိုအုန်းခင် …. စသည့်လူငယ်များက ဒို့ဗမာအစည်းအရုံးအား ထူထောင်၏။ ၁၉၃၀ မေလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ဒို့ဗမာအစည်းအရုံးမှ ကြေညာစာတမ်းတစောင်အား ထုတ်၏။ အမှတ် ၃၃ ၊ ရေတာရှည်လမ်း၊ ဗဟန်း …. လိပ်မူနှင့် ဖြစ်သည်။
ဗမာစကားကို လေးစားပါ” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
ဒီစာတန်းလေးကို ဒီနေရာ မှ ယူထားပါသည် ။
မြန်မာတွေ တလွဲ ဆံပင်ကောင်းကြတယ် လို့ဒို့ဗိုလ်ချုပ်ပြောခဲ့ တဲ့စကားလေး တခွန်း ပြန် အမှတ်ရ မိ ပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုးဖြစ်ရတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သိမ် ငယ်တယ် လို့ ထင်သူ များ တကယ် ရှိတယ်လေ ။ ကိုယ်တွေ့ လည်း ကြုံဖူး ပါရဲ့။ တဆင့်စကားနဲ့ လည်း ကြားဖူး ပါရဲ့။ ဇာတ်လမ်းတွေ မတူ ကြပေမဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ် မြန်မာ လူမျိုး ဖြစ်ရတာ ရှက်စဖွယ်လို့ခံယူထားသူများ၊ မြန်မာ စကားပြောတတ်တယ် ဆို တာကို လူပုံ လည်မှာ ထုတ်ဖေါ်ပြော ဖို့ရှက်ရွံ့ နေသူများ အတွက် ဒီစာလေးကို ရေးဖြစ် ပါတယ် ။
သာသည့်မြေသို့ ဆိုတဲ့ဦးတည်ချက်နဲ့အမိမြန်မာ ပြည်ကြီးကို စွန့် ခွာ လာခဲ့ ရတာ မျိုးမဟုတ်ဘဲ အခြေ အနေ အရပ်ရပ်ကြောင့်ကိုယ်ချစ်တဲ့မိသားစု ဆွေမျိုး မိတ်ဆွေ ။ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်းကို စွန့် ခွာ ခဲ့ ရပြီး သူတပါး တိုင်းပြည်မှာ မျက်နှာ ငယ်စွာ ၊ ဆင်းရဲ ဒုက္ခပေါင်းများစွာ ကို ရင်ဆိုင် နေထိုင် ကြရသူတွေ သိန်း နဲ့ချီ ရှိနေကြတယ်လေ ။ တချို့ လည်း အဆင်ပြေတယ်။ တချို့ လည်း အင်မတန် ဒုက္ခရောက်ကြတယ်ပေါ့ ။
တိုင်းပြည်သစ် နေရာသစ် တခုကို ပြောင်းရွှေ့နေထိုင် ကြရသူတွေ အတွက် အကြီးဆုံး ပြသနာ ဦးဆုံးတွေ့ ကြုံ ရတဲ့ပြသနာ ကတော့ ဘာသာစကား တခုပါဘဲ။
လူတဦးနဲ့တဦး ဆက်သွယ်ကြမယ်ဆိုရင် ဘာသာစကား တခု နဲ့ပြောဆို ဆက်သွယ်မှ အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် ။လွယ်ကူတဲ့ အဓိပ္ပါယ် တခု အတွက် တော့ ခြေဟန် လက်ဟန် နဲ့ ပြောရင် ရတဲ့ အခါမျိုးလည်း ရှိပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့စကားလုံးတိုင်းကို ခြေဟန် လက်ဟန် နဲ့ ပြောလို့ပြီးတာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဆွံ့ အ နားမကြား သူ တွေ အတွက် အထူး သင်္ကေတ တွေ တတ်ထားကြရင်တော့ တမျိုးပေါ့ နော် ။ဒါဆို စကား မပြောလည်း သိပ် ကိစ္စ မရှိပါဘူး ။ ပြီးတော့ ကမ္ဘာသုံး အင်္ဂလိပ် စကားကို ရေလည်အောင် ပြောတတ်ကြရင်လည်း တပန်းသာ ပါတယ် ။
ဒါတောင် အင်္ဂလိပ် စကား ကို အဓိက သုံးစွဲကြတဲ့ နိုင်ငံ မျိုး မှာမှ ဖြစ်မှာလေ ။ ဥပမာ .. ယိုးဒယား နိူင်ငံ မှာ အသင် ဘယ်လောက်ပဲ အင်္ဂလိပ်စကား ကို ဂျွမ်းပစ်အောင်ပြောနိုင်သူ ဖြစ်ပါစေ ၊ လမ်း မှာ Taxi ဆို ပြီး တားစီးကြည့်လိုက်ပါ ။ ပြီးတော့ အင်္ဂလိပ် လို ရှာလိမ်သွားတဲ့ အထိ ထပ်ခါတလဲ ပြောပြီး သွားချင်တဲ့ နေရာ ပြောကြည့် လိုက်ပါ ၊ ကားမောင်းတဲ့ သူ အများစု က ခေါင်းတလည်လည် မျက်စိ တလည်လည် နဲ့ ၊ ဒီတော့ ဆက်လက်ပြီး ဘရိုးကင်း အဂ်လိပ်ရှ် နဲ့နစ်ပါး သုံးပါး အပါးပေါင်းများစွာ ပြော ဖြစ်ပါလိမ့် မယ် ။ ပြီးတော့ ဘော်ဒီလဲန်းဂွတ်ရှ် သို့တဆင့် တက် ပြီး နောက်ဆုံး အသင် ကံကောင်းရင် သွားလိုရာ ကို တခါတည်းနဲ့ လျှောလျှော ရှုရှု ရောက်ပါမယ် ။ ဒီလို ကံမကောင်းရင်တော့ ဟို ပတ် ဒီပတ် နဲ့ ဘဲ အချိန်ကုန် ၊ ငွေကုန် ၊လူပန်း ပေရော့ ။ ကံကောင်းလို့ယိုးဒယား စကားပြောတတ်တဲ့ အသိ မိတ်ဆွေ လေးများရှိနေရင်တော့ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် သူ့ ကို ဖုန်းဆက် ၊ စကားပြန် လုပ်ဖို့အကူ အညီတောင်း ၊ကားမောင်းသူ ကို ဒါရိုက်ပြောခိုင်းနိုင်ရင်တော့ လိုရာခရီးကို အဆင်ပြေစွာ ရောက်နိုင်ပါမယ် ။ နောက်တနည်းက သူတို့ဘာသာစကားနဲ့ ရေးထားတဲ့ လိပ်စာ ကဒ်ပြားလေး၊မြေပုံလေးမျိုး ဆောင်ထားရင်တော့ ဒီ ပြသနာတွေနဲ့ သိပ်ကြုံရမယ် မဟုတ်ဖူးပေါ့နော်။
ဒါလေးက အများတွေ့ နေရတဲ့အသေးအမွှား ပြသနာလေး များထဲ က အလွယ်တကူ ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အကြောင်းလေးတခု ပါ ။
အဓိက ပြောလိုတာက ဘာသာ စကားတခု ဟာ တဦး နဲ့ တဦး ဆက်သွယ်ရေးမှာ ဘယ်လောက် အရေးပါတယ် ဆိုတာ သိစေချင်လို့ ပါ ။ ဒီလို အချိန်မှာ ကိုယ်က မပြောတတ် မဆိုတတ် ၊ တဖက်လူ ကလည်း ကိုယ်ဆိုလိုတာကို သဘောမပေါက် တဲ့ အခါမျိုးမှာလေ ကိုယ့်ဘေးက ဖြတ်သွားတဲ့သူ တယောက်က ကိုယ့်ဘာသာ စကားတခုကို ပြောဆိုတတ်ပြီး ဝင်ရောက် ကူညီလိုက်တဲ့ အခါ အဆင်ပြေသွားတတ်တော့ ကူညီ လိုက်တဲ့သူ တဦးအတွက် ဘယ်လောက်မှ အပန်းမကြီးဘူး ဆိုပေမဲ့အကူညီခံလိုက်ရတဲ့သူတယောက်အတွက် အင်မတန်မှ ဝမ်းသာစရာကောင်းလှတယ် လေ ။ ဒါပေမဲ့ တချို့တချို့ သော သူများ ၊ ခုတော့ လူ တော်တော် များများဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မြန် မာ လူ မျိုး တယောက် ဖြစ် ပါတယ် ဆို ပြီး လူပုံ လည်မှာ ထုတ်ဖေါ်ပြရမှာ ကို ရှက်ကြ ၊ ရှက်စဖွယ်လို့ခံယူထားနေကြတာ အတော်လေး ဝမ်းနည်းစရာ ပါဘဲ ။
ဒီလို နဲ့လူတယောက် အသက် ဆုံးရှုံး စေခဲ့ ရတဲ့အဖြစ် အပျက်လေး တခု အမှန်တကယ် ဖြစ်ခဲ့ တယ် ဆိုရင် အသင်တို့ဒီစာလေး ဖတ်ပြီးချိန်မှာ ဘယ်လို ယူဆ ကြပါမလဲနော် ။
ထိုင်ဝမ်ကျွန်း နိုင်ငံလေးတခု ထိုင်ပေမြို့ ပေါ်ရှိ နာမယ်ကျော် ဆေးရုံကြီးတရုံ မှ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးတဦး ဆေးခန်းထိုင်နေတဲ့ တရက် ..အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး ဆိုပေမဲ့ အသက် ၃၀ မပြည့်သေး ချောမောလှပသော အမျိုးသမီး ဆရာဝန်၊ ရင်ခေါင်းနှင့် ပတ်သက်သော ရောဂါဆိုင်ရာ ကုသမှုမှာ မှာ နာမယ်ကြီးဆိုတော့ လူနာအပြည့်မနက် ၈း၃၀ မှ ၁၂း၀၀ နာရီ ထိ ပြင်ပလူနာကြည့် ချိန်မှာ လူနာ ၆၀-၇၀ လောက်ကို ကြည့်ရှူ ကုသပေးရတဲ့အတွက် လူနာတဦးကို ၄ -၅ မိနစ်မျှသာ အချိန်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့။ဒါတောင် သူ့ ရဲ့ အကူ သူနာပြု ဆရာမလေး နှစ်ဦးက လူုနာ တဦးချင်းစီရဲ့ လိုအပ်မဲ့ရာဇဝင် အကျဉ်းချုပ် လေးတွေ၊ ကိုယ်အလေးချိန် ၊ သွေးပေါင်ချိန်နဲ့ ကိုယ်အပူချိန် ဇယားကွက်များ ၊စာရွက် စာတမ်းများကို အဆင်သင့် ဖြည့်စွက် ပြင်ဆင်ထားပြီးသားမို့ဒီလောက်အချိန်ပိုင်းအတွင်းဒီလောက်လူနာများကို ပြီးစီးအောင် ကြည့်ရှူ နိုင်တယ်ပေါ့လေ။
အဲဒီရက်က တနလာင်္ နေ့ ဆိုတော့ လူနာ ပိုများတဲ့ အတွက် ခပ်သွက်သွက်လေး ကြည့် တာတောင်မှ ၁ နာရီ လောက် ထိ လူနာတွေ တန်းစီနေကြမယ်ဆိုတာ သူရော ၊ ဆရာမလေးတွေ ပါ သဘောပေါက်ပြီးသားပေ့ါ ။ ဒီလိုနဲ့ ၁၁ နာရီ ထိုး ခါနီးမှာ အသက် ၇၀ အရွယ် လူမမာ အဖွားကြီး တယောက် ဟာ ၁၃-၁၄ နှစ် အရွယ် မြေးမလေး ရဲ့ တွဲ ယူလာခြင်းကြောင့်စမ်းသပ်ခန်းထဲ ကို တုန်ရီစွာ နဲ့ ဝင်ရောက်လာ ပါတယ်။ သူရဲ့ မှတ်တမ်း ရာဇဝင်မှာ သွေးပေါင် ချိန် ။ အပူချိန် ။ကိုယ်အလေးချိန် စတာတွေ က လွဲလို့ဘာ ရောဂါရာဇဝင် မှတ်တမ်းမှ ဖြည့် စွက်ထားတာ မရှိတော့ အထူးကု ဆရာဝန်မကြီး မျက်နှာ က အလိုမကျ ၊ သူ့ ဆရာမလေးတွေ ကို မေ့ရကောင်းလား ဆိုတဲ့ လေသံနဲ့ လှမ်းမေးလိုက်တယ် ။( အားလုံး ကို တရုပ်ဘာသာ စကားနဲ့သာ ပြောဆို ကြတာပါ ။ )
"ဒီလူနာ မှတ်တမ်းက ဘယ်လိုဖြစ်လို့ဖြည့်စွက်မထားရတာလဲ ။ ဒီနေ့ လူနာ များတယ် ၊ အချိန် မလောက်ဖူးဆိုတာ မသိကြဘူးလား ။"
ဒီတော့ ဆရာမလေးက လှမ်းပြောပါတယ်
"ဒေါက်တာ ရေ ။ ဒီလူနာရော ၊ အိမ်သားရော ၂ယောက်စလုံးက မေးတာ တွေ သေချာ မဖြေနိုင်ကြဘူး ။ ဒေါက်တာနဲ့ တွေ့ မှ ကိုယ်တိုင်ပြော မယ်ဆိုလို့ ။ ပြီးတော့ သူတို့ ပြောတဲ့စကားတွေ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်စလုံး သေချာ နားမလည် လို့ ခြေဟန် လက်ဟန် နဲ့ မနဲ အဓိပ္ပါယ်ဖေါ် ယူရတာ ။"
ဒီတော့မှ လူမမာ အဖွားကြီးက စပြီး တုန်ရီ စွာနဲ့စကားပြော ပါတယ် ။ မြန်မာ လို ပီပီ သသ ပါဘဲ ။
"သမီးရယ် ။ အမေတို့ဒီကိုလာတာ မိတ်ဆွေ တဦးက ညွှန်လိုက်လို့ပါကွယ် ။ဒီဆေးရုံမှာ ဗမာပြန် ဆရာဝန်မလေး တယောက် ရှိတယ်ဆိုလို့သမီး ဆီ ကို အားကိုးတကြီးနဲ့လာတာပါ ။ အမေတို့ ဒီရောက်တာလဲသိပ်မကြာသေးပါဘူး ။ စကားကလည်း လည်ဝယ်အောင် မပြောတတ်လို့ အခု နေမကောင်းဖြစ်နေတာတောင် ဘယ်နားမှာ ဘယ်လို ပြရမယ်မှန်း မသိလို့ပါကွယ်။"
ဆရာဝန်မလေး မျက်နှာ အနည်းငယ် ပျက်သွားတာကို ဘေးက ဆရာမလေးက သတိပြု မိလိုက်ပါတယ် ။
ဒီတော့ဒီလူနာ အဖွားကြီးပြော နေတာ ကို သူ တို့ ဆရာဝန် မကြီး နားမလည် ဘူးထင်လို့ကြားမှ ဝင်ပြီး လူနာကို တရုပ်လို ထပ်မေးပါတယ်။
"အမေကြီး ခံစားနေရတဲ့ ရောဂါ အခြေအနေကိုပြောပါ ။ ချောင်းဆိုး သလား၊ လည်ချောင်းနာ သလား ။ နှာစေးလား ။"
ထုံးစံအတိုင်း ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိတဲ့ လက္ခဏာ လေးတွေ မေးခြင်း ပါဘဲ ။
ဒီမေးခွန်း အဓိပ္ပါယ် လွယ်လွယ်ကူကူလောက်ကိုတော့ အဖွားကြီးက နားလည်ဟန်ရှိပါတယ် ။ နားလည်ပေမဲ့လုံးစေ့ ပါတ်စေ့ ပြန်ပြောဖို့ ရာတော့ သူ့ အတွက် မလွယ်ကူ လှပါဘူး။ အဲဒီတော့ အဖွားကြီးက မြန်မာလိုဘဲ ပြန်ဖြေတယ်ပေါ့ ။
"အမေက ချေုာင်းဆိုးနေတာ ကြာပါပြီ ။ရင်ကြပ်ပန်းနာ ကလည်း ရှိနေတာ နှစ်ပေါင်းမနည်း တော့ပါဘူး သမီးရယ် ။အမေ့ ယောကျာင်္း မဆုံးခင် ကတည်းက၊ ခု သူ မရှိတော့တဲ့ နောက်ပိုင်း ရောဂါက ပိုဆိုးလာတာ ၊ ဒီရောက်တာ ၆ လ ရှိပြီ ။ အစားအသောက်ပျက် ပြီး လူက တဖြေးဖြေး ပိန်ချုံးလာ တာ ၊ ခေါင်းလည်းမူးတယ် ၊ ရင်တုန်တယ် ။ အစာ အိမ် နာ သလို မကြာ ခဏ ဖြစ်တယ် ။ အားမရှိဘူး " ။ အစချီပြီး .... အသက်ကြီးသူတွေရဲ့ ထုံးစံ အတိုင်း ရှေး ပဝေသနီ မှ အစချီကာပြောနေတော့ ဆရာဝန် မလေး မျက်နှာ သိသိ သာသာ ပျက်စ ပြု လာ ပါပြီ ။ အနောက် မှာ လူနာတွေ ကြည့် စရာ တပုံကြီး ကျန်နေသေးတော့လောမယ် ဆို လည်း လော လောက် ပါတယ်။
အဲဒီတော့ မျက်နှာတင်းတင်း နဲ့ ဘဲ တိုတို တုတ်တုတ် အသံ အနည်းငယ် မြှင့် ပြီး တရုပ်ဘာသာစကားနဲ့ ပြန်ပြော တယ်လေ ။
" ဝမ်းနည်း ပါတယ် အမေကြီင်္း ။ ခု အမေကြီး ပြော တဲ့ရောဂါ လက္ခဏာ အရ ဆိုရင် ကျွန်မ နဲ့ သိပ် မဆိုင် ပါဘူး ။ ဒါပေမဲ့ဓါတ်မှန် လေးတော့ ရိုက်ပေးလိုက် ပါမယ် ။ ပြီးမှ ဆက်လက်ဆွေးနွေးကြတာပေါ့ ။ ရက်ချိန်းပေးတဲ့ ရက် မှာ ပြန်လာ ပြပါ ။"
ဒီလိုနဲ့ ဘဲ လူနာ အဖွားကြီးရယ် သူ့ မြေးမလေးရယ် မျက်စိသူငယ် နားသူငယ် နဲ့ ဓါတ်မှန်ရိုက်ဖို့စာရွက်လေး ကိုင်ပြီး ထွက်ခွာ သွား ရှာလေရဲ့။
ဒီလို နဲ့မေ့မေ့ ပျောက်ပျောက် ပါဘဲ။ ၆ လဆို တဲ့ အချိန် ကာလလေး ဟာ လျှင်မြန် စွာနဲ့ ဘဲ ကုန်ဆုံး သွား ခဲ့ ပါပြီ။
ဒီ မနက် မြန်မာပြန်တွေ စုဝေး နေထိုင်ကြတဲ့ဈေးလမ်း လေး ပေါ် မှာ အမျိုးသမီးကြီး တဦးဟာ ၁၃-၁၄ နှစ် အရွယ် မိန်းကလေး တဦးကို မေးမြန်းနေ တဲ့စကား စုလေးကို အမှတ် မထင်ကြားလိုက် ရလို့စပ်စု တတ်သူ ကိုယ် တယောက်လည်း မနေနိုင်စွာ နဲ့ စကား ဝိုင်းလေးထဲ သို့ရောနှောပါဝင် မိခဲ့ ပါတယ် ။
အမျိုးသမီးကြီး ။" ဟေ့ ကလေး မ ၊ နင်က ဟို ဒေါ်ကြိုင်သန်း ရဲ့ မြေး ကလေး မဟုတ်လား ။ နင့် အဖွားရော ၊ သက်သာရဲ့ လား ။ ငါလည်း မတွေ့တာ ကြာ သွားပြီ ။ ငါပြောလိုက်တဲ့ဆေးရုံ မှာ ဆရာဝန် မလေးကို သွားရှာတာ အဆင်ပြေ တယ် မဟုတ်လား ။"
မိန်းကလေး ။ ( ငို မဲ့ မဲ့ မျက်နှာဖြင့်) "ကျွန်မ အဖွား ဆုံးသွားတာ တနေ့ က မှ ရက် ၁၀၀ ပြည့် လို့ ဘုရား ရှစ်ခိုး ပွဲ လုပ်ရတာ ။"
အမျိုး သမီးကြီး ။" ဟေ ။ နင့် အဖွား ဆုံးသွား တာ ငါတောင် မသိလိုက်ဖူး ၊ ဘာရော ဂါ နဲ့ လဲ ။ ဘယ်လို ဖြစ်ရတာ လည်း အေ ။ငါ သေချာ ညွန်လိုက်တာ အဲဒီ ဆရာဝန်ဆီ ။ နင်တို့သွား မကြည့် ကျ ဖူးလား အေ ။ ဒုက္ခ ပါဘဲ ။ သူ က အရမ်းတော် တာ ။ ဘာရောဂါ မို့ လို့ ကု မရ တာ လည်း အေ ။ ငါ စိတ် မကောင်းလိုက်တာ ။"
မိန်းကလေး ။" အဖွား ဖြစ်တာ ဘာလည်း တော့ အစ ကသေချာ မသိဖူး ။ အဲဒီ တခါ ပဲ ဒေါ်ကြီး ညွှန်လိုက်တဲ့ ဆေးရုံ သွားဖြစ်တာ ။ ဟို ပြတဲ့ဆရာဝန် မလေး က ဗမာလို မတတ်ဖူးတဲ့။ သူုဆရာ မလေးတွေ က ပြော တာပဲ ။ အဖွား ကလည်း အဲဒီ တခေါက် ဓါတ်မှန် ရိုက်ခဲ့ ပြီး နောက်ထပ် မသွား ချင်တော့ လို့အဖြေလည်း သွားမကြည့် တော့ဖုး ။"
အမျိုးသမီးကြီး ။ အဲ ဒါဆို ဘယ်လို ဖြစ်ပြီး ဆုံးတာလည်း အေ ။ ညီးတို့ကလည်း တယ်ပေါ့ ဆ တာ ကိုး။
မိန်းကလေး ။ အဖွား မဆုံးခင် ၃ ရက်လောက်က ညကြီး သွေးတွေအန်ပြီး သတိလစ်သွားလိုအိမ်ဘေးက အမတယောက့် အကူ အညီနဲ့ သမီးနဲ့ အကိုတို့အရေးပေါ်ကား ခေါ်ပြီး ဆေးရုံသွားကြတယ်။ဟိုရောက်တော့ ရင်ဘတ်ကို ဆေးဓါတ်မှန်ရိုက်တော့ အဆုပ်ကင်ဆာ ကအရမ်းပြန့် နေပြီတဲ့ ဆရာဝန်ကြီးကပြောတယ် ။ အသည်းအသန် ခန်းမှာ တင်ထားတာ ၃ ရက်နေတော့ အဖွားဆုံး သွားတယ် ကြီးဒေါ်ရဲ့။
အမျိ်ုးသမီးကြီး ။" ဟယ် ငါစိတ်မကောင်းလိုက်တာ ။ မိကြိုင်သန်းရေ ။ ဒီလိုမှန်းသိ ငါ နင့်ကို အဲဒီ ဆရာဝန်မလေးဆီ သွားပြဖို့မညွှန် လိုက်ပါဖူး အေ ။"
ဒီ အမျိုး သမီးကြီး က နောင်တသံ တဝက် ငိုသံတဝက် ဖြင့် မိန်းကလေးကို ပြော နေချိန်မှာတော့ ကိုယ်လည်း သူတို့ နည်းတူ စိတ်မကောင်းခြင်းတွေနဲ့ဒီစကားဝိုင်းလေးဘေးမှ ထွက်လာမိခဲ့ ပါတော့တယ် ။
ရင်ထဲမှာတော့ မချိလှပါဘူး ။ ကိုယ့် မြန်မာလူမျိုး အချင်းချင်း အမိမြေနဲ့ ဝေးရာ မှာ ပြန်လည်ဆုံတွေ့ ကြရင် တချို့ လည်း ဝမ်းပန်းတသာ နဲ့နှုတ်ဆက်ကြတယ် ။ ပြူငှာ ဖေါ်ရွေတတ်တဲ့ မြန်မာ ဓလေ့ ကို ပြနိုင်ကြတဲ့ သူတွေ လည်း ရှိကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ တချို့ သော သူတွေမှာတော့ လူကြား သူကြားထဲ မှာ ဗမာလို ပြောပြီး နှုတ်ဆက် ရမှာ ကို မလိုလားကြဘူး ၊ သူ့ ကို သူများက အထင်သေးတဲ့ အကြည့် မျိုးနဲ့ ကြည့် မှာကို စိုးရိမ် နေတတ်ကြတယ် ။ ပညာတွေ တဖက်ကမ်းခတ်အောင် ဘယ်လောက်ပဲ တတ်ကျွမ်းနေပါစေ ။ကိုယ့်လူမျိုး ၊ ဘာသာ စကားကို ကိုယ် ကိုယ်တိုင်က သိမ်ငယ်တယ် လို့အထင်ရောက်နေသူတွေ လည်း ရှိ နေကြတာ လေ ။ အဲဒီလို အတွေး အခေါ် ဆင်းရဲ နေကြတဲ့ လူတွေများများ ရှိနေရင်တော့ တချိန် ချိန်ကျရင် မြန်မာစကားဆိုတာ တိမ်ကော သွား လေ မလား ။
ဒို့ဗိုလ်ချုပ် ပြောခဲ့ သလို ပါဘဲ ၊ မြန်မာတွေ တလွဲ ဆံပင်ကောင်း နေကြတယ် ဆိုတာ .......
(ဆရာမလေးတဦး ပြန်ပြောပြသော တကဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတခု ကို တွေးမိ၍ ရေးလိုက်မိပါတယ် )
:kiki : at 10/11/2009 11:26:00 PM